စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်း – Grab Love Story
မျိုးကို ဘားအံကိုရောက်တာ တစ်လကျော်ပြီ။ လုပ်ငန်းတို့းချဲ့နိုင်ရန်ကုမ္ပဏီမှ သူ့ကို စေလွှတ် လိုက်သည်။လုပ်ငန်းလုပ်ရန်နှင့် ရုံးခန်းဖွင့် နိုင်ရန်အဆင်ပြေမပြေ သူ့ကို ကွင်းဆင်းရန် စေလွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။မြေနေရာက ရှိပြီးသားမို့ အဲ့နေရာတွင် ရုံးတစ်ခုဆောက်ပြီး လူနေနိုင်ရန် အဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေသည်။လတ်တလောက ဘာမှမ ဆောက်ရသေးတာမို့ သူ ဘားအံတွင်နေဖို့ စုံစမ်းရာ အဆောင်သဘောမျိုးငှါးနေလို့ရတာ နဲ့ အဲ့အိမ်မှာငှါးနေလိုက်သည်။ငှါးနေတဲ့သူ လေးငါးဦးရှိပြီး ငယ်ရွယ်သူတွေချည်းမို့ သူနဲ့အဆင်ပြေသည်။ယောက်ကျားလေးတွေမို့လဲ ခဏနဲ့ ရင်းနှီးသွား ကာ သူလုပ်ချင်သည်များကို စုံစမ်းလွို့ယ် သည်။သူတို့ကုမ္ပဏီက စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီအကြီးတစ်ခု။သူကတော့ product အင်ဂျင်နီယာ။လုပ်တာကိုင်တာနဲ့ အရည် အချင်းတွေကြောင့် ရာထူးခဏလေးနဲ့တိုးကာ လူကြီးသဘောကျသည်။
ဒီနေရာကို မန်နေဂျာ အနေနဲ့လွှတ်လိုက်ပြီး သူ့ကို အားလုံးအာဏာ ကုန်လွှဲအပ်ထားသည်။ရုံဆောက်ဖို့နဲ့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေစေရေးအ တွက် ငွေကိုစိတ်ကြိုက်သုံးခွင့်ပေးထားသည်။တစ်လကျော်ပဲရှိသေးတာမို့စုံစမ်းလေ့လာဆဲ ပင်။မိန်းမကကိုယ်ဝန်ရနေပြီ သူဒီကို လာတော့အိမ်မှာတယောက်တည်းစိတ်မချတာနဲ့ ပုသိမ်ကသူ့မိဘတွေဆီလိုက်ပို့ပြီးမှ လာရသည်။ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာမည်မသိ။ ခုချိန်ထိတော့ အရမ်းအလုပ်မများ။ဖိအားလဲကင်းသည်။စုံစမ်းရသလောက် အခြေအနေကောင်းသည်။ထိုင်းနဲ့နီးသည်မို့ ထိုင်ကဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တော့ ယှဉ်ရ မည်။ကျန်တာတွေကတော့ သိပ်ကိစ္စ မရှိ။ဈေးနှုန်းကွာဟမှုနဲ့ ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအား တွေအတွက် သူဆက်စုံစမ်းရသည်။ညဖက်ရောက်လာရင် အဆောင်က ကောင် လေး တွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်လိုက် ဘောလုံးပွဲကြည့်လိုက် လျှောက်လည်လိုက် ပြန်လာ မိန်းမဆီဖုန်း ဆက်။ ပြီးရင် လိုင်းဖွင့် ကာသုံးသည်။အိပ်ချင်လာမှအိပ်လိုက်သည်။
မနက်ဘယ်ချိန်ထထရသည်ကိုး။နှစ်လ ခွဲ လောက် ကြာတော့ ရုံးခန်းနဲ့အဆောင် ဆောက်ရန် ဂိုဒေါင်အဖြစ်ဆောက်ရန် ဘတ်ဂျက်ရပြီ။အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းလဲရပြီမို့ အဆောင်ကိုအရင်ဆောက်ရသည်။ကန်ထရိုက်ကို ရုံးချုပ်က ချပေးတဲ့ ကန်ထရိုက်နဲ့ပဲဆောက်သည်။ပုံမှန်ပဲလည် ပတ်နေသည်။ညဖက်ဆိုရင်လိုင်းသုံးရင်းနဲ့ ချက်ဖြစ်သည်။သူ့ရုံးက ကောင်မလေး တစ်ယောက်နှင့်။ဖြူကျော့ဝေ။ခင်တာကတော့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီ။သူမအလုပ်ဝင်စက ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ့ဖူးသည်။ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ က။facebookမှာတွေ့လို့ addလိုက်ကာ စကားပြောဖြစ်ကြရင်းနောက်ပိုင်းရင်းနှီးသွားတာ။အစက သူမက သူ့ကို မိန်းမရှိမှန်းမသိ နောက်မှသိသွားတာ။ရုံးတွင်းထမင်းစားချိန်တိုင်း ဆုံဖြစ်ကြသည်။ ဒီရောက်လာသည့်နောက်ပိုင်း လိုင်းပေါ်တွင် သူမနဲ့စကားပြောဖြစ်သည်။ လူကအရပ် ကမပုမရှည် သေးသေးပင်။တင်တွေရင်တွေ က ခပ်သေးသေး။အစကသိပ်မပြင်မဆင်။နောက်ပိုင်း ပြင်လာဆင်လာသည်။
ရုံးကို ယူနီဖောင်းမဝတ်ရသည့်ရက်တွေဆိုအလန်း။အကြပ်တွေဝတ်သည်။ရုပ်ရည်ကတော့ ချောတဲ့အထဲတော့မပါပေမယ့် ကြည့်ကောင်း သည်။ရည်းစားရှိသည်လို့ကြားပေမယ့် မေး ဖြစ်တိုင်းမရှိဟုပြောတက်သည်။ရုံးမှာဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ့မိတိုင်းဖုန်းအ ကြာကြီးပြောတက်လို့သူစဖြစ်သည်။ခုသုံးလေးရက်ရှိပြီ။ဘဲနဲ့အဆင်မပြေ သည်ထင့်။အသည်းကွဲအကြောင်းတွေကို လိုင်းပေါ်တင်တက်သည်။သူနဲ့အရမ်းကို ရင်းနှီးလာသည်။viberကနေ ဖုန်းပြောဖြစ်ကြသည်။သူလဲယောက်ကျားသားမို့ ဘာရယ်မဟုတ် ဖွန်ကြောင်တာမမည်အောင် ကြောင်သည်။သူမကလဲ ပြန်အီသည်။သူမ က ပုံတွေပို့ပေးတက်ပြီးသူကလဲ ပြန်ပို့ ပေးတက်သည်။လာလည်ရင် ဂရုစိုက်မှာလား မေးသည်။လာလည်ရင်အကုန်ဂရုစိုက် မယ်လို့ပြောကာစသည်။ သူဒီရောက်တာခြောက်လကျော်ပြီ။မိန်းမလဲမွေးခါနီးပြီ။မွေးရင်တော့ ခဏခွင့်ပြန်မည်ပြောထားသည်။အဆောင်ကတော့ပြီးပေမယ့် ဂိုဒေါင်နဲ့ ရုံးခန်းကမပြီးသေး။နှစ်လလောက်လိုသေးသည်။
မိန်းမဆီ သုံးခေါက်လောက်ပဲရောက်သည်။မရောက်ဖြစ်နောက်ပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုအစမ်းသဘောရောင်းကြည့်ရာ မဆိုးလှတာကြောင့် သူလဲအားစိုက်ကာလုပ်ရသည်။ကုမ္ပဏီကချီးကျူးသည်။လစာတိုးသွားပြီ။ ညရောက်တိုင်းလုပ်နေကြထုံးစံ လိုင်းဖွင့်လိုက်ရာ ဖြူကျော့ဝေက ဒီတပတ်ကျ မော်လမြိုင်လာပီး ဘုရားဖူးမည်။စက်စဲသွားမည်လိုက်ခဲ့လို့ပြောသည်။တစ်ယောက်တည်းလားဆိုတော့ အင်းတဲ့။မော်လမြိုင်မှာ သူသင်တန်းတုန်းကခင်တဲ့အမတစ်ယောက်ရှိပြီးသူနဲ့သွားမည်တဲ့။အဲ့အမက သူ့ဘဲနိုင်ငံခြားက ပြန်လာလို့တွေ့ချင်တာနဲ့ သူကလဲ ဘုရားဖူးနဲ့ ကမ်းခြေသွားချင်နေတာအတော်ဖြစ်သွားလို့ ခေါ်တာမို့ လာမှာဖြစ်ကြောင်း သူတို့ကအတွဲမို့ သူတစ်ယောက်တည်းပျင်းနေမှာမို့အားရင်လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သည်။သူရက်တွက်ကြည့်သည့်သူမလာတဲ့ရက်ကျအားမအား။သူ့အတွက်ဒီမှာပိတ်ရက်မရှိ။သူနားချင်ရင်နားသည်။အဲ့ရက်ကျအရေးတကြီးအလုပ်မရှိပေမယ့် နည်းနည်းတော့ရှိသည်။
ကြိုတင်လုပ်ထားရင်ရသည်။ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမလဲမေးတော့ ကျိုက်ထီးရိုးကိုမနက်တက်မည်ညနေပြန်လာပြီးပြန်အိပ်ကာ စက်စဲကိုနောက်ရက်မနက်သွားပြီး နှစ်ရက်နေမည်ဖြစ်သည်။သူ့အတွက်အဆင်ပြေပြိမို့လိုက်မည်ပြောရာ အကုန်အကျခံရမယ်လို့ပြောတော့ ဘာပြန်ပေးမှာလဲမေးလိုက်သည်။လိုချင်တာယူပေးမှာပေါ့လို့ပြောသဖြင့် သူ့စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်သွားရသည်။မိန်းမနဲ့ခွဲနေရတာကတကြောင်း အလုပ်တဖက်နဲ့မို့ အပျော်ဖက်သိပ်မရောက်ဖြစ်။တောင့်တမိပေမယ့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဖြေရှင်းလိုက်ရသည်မို့ စိတ်ထဲမှာအတွေးတချို့နဲ့စိတ်ထန်သွားရသည်။ဒါကြောင့် အီစကလီရိုက်ကာ ဟိုမကျဒီမကျစကားတွေပြောရင်းနဲ့ညနက်သွားရသည်။နောက်ပိုင်းရက်တွေသူအလုပ်တွေကို ကြိုလုပ်ထားကာ သူသွားမည့်ရက်တွင် အခက်အခဲမဖြစ်စေရန် အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ကို ငွေသုံးရက်စာကြိုပေးထားလိုက်သည်။ဖြူကျော့ဝေကတော့ ဒီနေ့မနက်အစောကြီးမော်လမြိုင်သို့မလာပဲ ကျိုက်ထိုနားတွင် သူ့အဖ်ာအတွဲက စောင့်ကာကျိုက်ထီးရိုးတက်သွားသည်။
ညနေမော်လမြိုင်သို့လာအိပ်ရန်ပြောပြီးသူတို့ကိုစောင့်နေခိုင်းသည်။ဒါကြောင့်သူလဲမှာစရာရှိတာတွေမှာရသည်။သူသွားမည့်ရက်တွင်း ပြသနာတစုံတခုမဖြစ်စေရန်သေချာမှာရသည်။ရုံးကိုတော့ ကွင်းဆင်းစည်းရုံးရေးဆင်းမည်လို့သတင်းပိုထားသည်။မိန်းမကိုလဲအဲ့လိုသာပြောလိုက်ပြီးဖုန်းလိုင်းမိမှဆက်မည်။မဆက်ရင်စိတ်မပူဖို့မှာထားသည်။ညနေကျ နောက်ဆုံးလိုင်းကားနဲ့မော်လမြုင်သို့သွားလိုက်သည်။ဟိုရောက်တော့ ကားဝင်းတွင်စောင့်နေလိုက်သည်။တော်တော်ကြာတော့ ဖြူကျော့ဝေကပြန်ရောက်ပြီလို့ဖုန်းဆက်ပြီးသူ့ကို ဘယ်ရောက်နေလဲမေးရာကားဝင်းတွင်စောင့်နေတာလို့ပြောတော့ သူတို့နှစ်ယောက်တော်တော်ကြာတော့ သူ့ကို လာခေါ်ကာ ဖြူကျော့ဝေသူငယ်ချင်းရည်းစားတည်းတဲ့တည်းခိုခန်းတွင်အတူနေခိုင်းပြီးမိတ်ဆက်ပေးသည်။ညနေစာကိုသွားစားကြရာ သူကရှင်းပေးလိုက်သည်။ မနက်အစောကြီးထကာစက်စဲသို့ လိငြ်းကားနဲ့သွားသည်။Mini busမို့ ကိုဇော်ဝင်းတို့အတွဲက ရှေ့ခုံတွင် သူနဲ့ဖြူကျော့ဝေက နောက်ခုံ။
ညက ကိုဇော်ဝင်းက သူနဲ့မဖြူမတွေ့ရတာ နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီ မဖြူမိဘတွေကသူနဲ့သဘောမတူ သူကဆင်းရဲတာမို့။ဒါကြောင့်စင်ကာပူသို့ထွက်ကာအလုပ်လုပ်နေပြီးမဖြူနဲ့ကတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်။မဖြူကလဲငစ္စာရှိသည်မို့သူနောက်ဆံအေးရသည်။သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပြတ်သွားပြီထင်နေပြီးသူစလုံးကိုသွားတာသိသည်။ပြန်ရောက်လာတာမသိတာမို့ မဖြူဒီလိုစီစဉ်တာဖြစ်ကြောင်း ဟိုမှာမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒါကြောင့်မို့ ဖြူကျော့ဝေကို ထိန်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းသည်။သူကလဲစိတ်ချပါလို့ပြောရာ ဖြူကျော့ဝေကို ဖန်ဖို့စသည်။သူက အိမ်ထောင်နဲ့ဖြစ်ကြောင်းမိန်းမကမွေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ သူက ရီပြီး ဘာဖြစ်လဲကွာ နောက်မနွယ်ရင်ပြီးတာပဲပြောသည်။မနက်ကျတော့ သူကပင် ဖြူကျော့ဝေကိုသူနဲ့လာထိုင်ချုင်းလိုက်လို့မဖြူနဲ့ကိုဇော်ဝင်းကကျေးဇူးတွေတင်နေသည်။ဖြူကျော့ဝေက မျက်နှာစူပုပ်နေသည်။လမ်းတွင်အဲ့အကိုနဲ့သဘောမတူပါဘူး ချောလဲမချောအသားလဲမဲသေးတယ်ဟုပြောလို့သူရီရသေးသည်။
သူမအသက်က၂၅ကျော်ပြီမို့သူ့ထက်သုံးနဖျသ်ငယ်သည်။ကိုဇော်ဝင်းနဲ့မဖြူကသုံးဆယ်နီးပါးတွေ။သူမကအတွဲ ကြားဝင်ဝင်ရှုပ်ချင်လို့လမ်းမှာသူ့ကို ချော့ရသည်။ဟိုရောက်ရင် ကြိုက်တာဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောမှမရှုပ်တော့ဘူးလို့ကတိပေးသည်။လမ်းမှာကားစီးရင်းငိုက်လာတော့ သူ့ပေါ်မှီပြီးအိပ်သည်။အရှေ့ကအတွဲကတော့ လှည့်ကိုမကြည့်။တချိန်လုံးပူးကပ်နေသည်။သူလဲကြာတော့လက်ကညောင်းလာလို့ နည်းနည်းပြင်တော့ဖြူကျော့ဝေက ရတယ် တင်ချင်တင်လို့ပြောသည်။သူလဲဂွင်ပဲမို့ လက်ကိုဖြူကျော့ဝေပုခုံးပေါ်တင်ထားလိုက်သည်။လမ်းက ခုန်သည်မို့လက်က ဟိုထိဒီထိတော့ထိမိသည်။ဟိုရောက်တော့ဟိုတယ်တွင် ဟိုအတွဲကနှစ်ယောက်ခန်းတစ်ခန်း သူတို့က တစ်ယောက်ခန်းနှစ်ခန်းယူသည်။သူတို့နှစ်ယောက်က ကပ်လျက်ပင်။ဟိုအတွဲက အပေါ်ထပ်မှာ။ဖြူကျော့ဝေက စိတ်ကောက်နေလို့ လိုက်ချော့ရသေးသည်။မဖြူကိုကောက်တာမို့ မဖြူက မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ချော့သည်။
သူက မဖြူကိုမျက်ရိပ်ပြကာ အသာနေ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး သူပဲစိတ်ကောက်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်သည်။သူ့ကိုကပ်ပြီးပြောသည်။ကျေးဇူးဆပ်ပါ့မယ်ဆိုလို့ သူရီရသေးသည်။တစ်ယောက်ခန်းဆိုပေမယ့်ကျယ်ပါငည်။ရေချိုးခန်းအိမ်သာပါပြီးအခန်းထဲမှာ Tvရေခဲသေတ္တာ အစုံပါသည်မို့မဆိုလှပေ။အခန်းထဲရောက်တော့နားနားနေနေ မေလိုက်သည်။ဖြူကျော့ဝေက သူ့ဆီဖုန်းဆက်ပြီးလျှောက်သွာချင်တယ်ပြောတော့ သူလဲဟိုဒီသွားကာ သူလိုချင်တာလေးတွေဝယ်ပေး စားချင်တာကျွေးပြီးပြန်လာသည်။ဟိုအတွဲကတော့ ထွက်ကိုမလာ။အချိန်ရှိခိုက်လုံ့လစိုက်နေကြသည်ထင်ပါ့။ ဖုန်းဆက်ရာမကိုင်လို့အခန်းတံခါးသွားခေါက်မယ်လုပ်နေလို့မနည်းတားရသည်။ဝဋ်လည်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး။သူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးသည်။ပြီးအခန်းထဲမှာ ခဏအိပ်လိုက်သည်။ညနေကျ ကမ်းခြေဆင်းကြသည်။သူတို့နှစ်ယောက်တစ်တွဲ ဟို နှစ်ယောက်က တစ်တွဲ သူတို့သွားချင်တဲ့ဖက်သွားသည်။သူလဲဘောကွင်းငှါးကာ ဖြူကျော့ဝေကို ပေးသည်။
ဖြူကျော့ဝေက အသားကပ်ဘောင်းဘီအနက်ရောင်ဒူးနားလောက်ကိုဝတ်ကာ အင်္ကျီလည်ဟိုက်အနက်ရောင် တင်ပါးကျော်ကိုဝတ်ထားသည်။သူ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းပြီးပို့စ်မျိုးစုံပေးနေသည်။ပြီးတော့ရေထဲဆင်းဆော့ကြရာ ရေမကူးတက်လို့ကြောက်နေသည်။သူလဲ အတင်းဆွဲခေါ်လာပြီးရေနဲ့ပက်ကာစနေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရဲလာကာသူ့ကိုရေနဲ့ပြန်ပက်လိုက်ဘောကွင်းစွပ်ကာရေကူးလိုက်လုပ်နေသည်။လှိုင်းတစ်လုံးဝင်သောင့်လိုက်ရာ သူမကြောက်လန့်ပြီး သူ့ဆီအတင်းဖက်ထားသည်။သူလပြန်ဖက်ကာ အားပေးလိုက်သည်။ပြီးတော့သူမရှက်သွားသည်။သူလဲမသိချင်ယောင်ဆောင်ကာဆက်ဆော့နေသည်။တစ်နာရီကျော်ကျော်ရေထဲဆင်းပြီးတော့ပြန်တက်လာကာ အခန်းထဲတွင်ရေချိုပြန်ချိုးလိုက်ကြသည်။အဝတ်အစားလပြီးတော့ ညနေစာထွက်စားကြသည်။ကိုဇော်ဝင်းက သူရှင်းပေးပြီး ညကျတို့လေးယောက်မီးပုံပွဲ လုပ်မယ်မိန်းကလေးတွေသောက်ချင်တာစားချင်တာပြောလိုဆိုတော့ ဖြူကျော့ဝေက ဂမ်းသာအားရလက်ခုပ်ထတီးလို့ ရီလိုက်ကြသည်။
ဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင်က အကုန်စီစဉ်ပေးသည်ပြောလို့ သူတို့မှာချင်တာမှာပြီး သူက ဂစ်တာရမလားမေးတော့ ရပါသည်တဲ့။ညဖက်ကျ သူတို့ယောက်ကျားလေးနှစ်ယောက်က ဝီစကီ မိန်းကလေတွေက စပိုင်ဝိုင်သောက်ကာ အမြည်းစားကြရင်းစကားပြောလိုက် စလိုက်နဲ့ပျော်စရာ။သူက ဂစ်တာတီးပြီးသီချင်းဆိုပြတော့ အားလုံးလိုက်ဆိုကြသည်။ပြီးတော့ ကကြသည်။ညကိုးနာရီကျော်ဆယ်နာရီလောက်ကျ မိန်းကလေးတွေကမူးလာပြီ။ဒါကြောင့်သူတို့လု လတ်စသတ်ကာ အခန်းကိုပြန်ကြသည်။အခန်းထဲရောက်လို့ အဝတ်လဲကာ TVကြည့်နေတုန်း ဖုန်းသံကြာတော့ ဖြူကျော့ဝေ မအိပ်ချင်သေးဘူး ပျင်းလို့လို့ပြောပြီး ကမ်းေုခလမ်းလျှောက်ချင်တယ်ဟုဂျီကျလို့မှောင်နေပြီနောက်ရက်မှပြောတော့ မရဘူး မအိပ်ချင်သေးလို့ လိုက်ပို့ဟုပြောသည်။သူလဲထွက်လာရာ သူ့အခန်းဝတွင်ရပ်ကာဖုန်းဆက်နေတဲ့ ဖြူကျော့ဝေကိုတွေ့လိုက်သည်။မျက်နှာက ပြုံးစေ့စေ့။ညအိပ်ဝတ်စုံ ပန်းရောင်အင်္ကျီနဲ့ဆင်တူ ဘောင်းဘီဝတ်ထားသည်။
သူလဲ ဖြူကျော့ဝေကိုခေါ်ကာ ဟိုနားဒီနားလမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောကြသည်။ပြီးတော့ ထိုင်ခုံပေါ်တွင်ယှဉ်ထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြသည်။သူ့ရည်းစားအကြောင်းကိုမေးတော့ သူ့ကိုရင်ဖွင့်သည်။သူမကိုဘယ်လိုနိုင်ကြောင်း စကားနားမထောင်ကြောင်း ခုလဲကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွဲနေတယ်လို့သူ့သူငယ်ချင်းများကပြောလို့မေးတော့ အလုပ်အတူတူလုပ်နေတာမို့တွဲသွားတွဲလာသွားဖြစ်ပြီး သူ့ကိုမယုံကြည်ရကောင်းလားဆိုပြီးနောက်ပိုင်းဖုန်းမဆက်တော့ကြောင်း လိုင်းပေါ်တွင်ဟိုသွား ဒီသွားပုံတွေကိုတင်နေကြောင်းပြောပြသည်။ညနက်လာတော့ လေကလဲတိုက်သည်မို့ အေးလာလို့ ဖြူကျော့ဝေက လက်ကလေးပိုက်ပြီးချမ်းနေသည်။သူကလဲအရက်ရှိန်နဲ့ရီဝေဝေဖြစ်နေကာ စိတ်ကလဲ ကြွနေသည်မို့ ဖြူကျော့ဝေပုခုံးကိုဖက်ကာ သူ့ရင်ခွငငထဲထည့်လိုက်သည်။ဖြူကျော့ဝေကလဲအလိုက်သင့်ပါလာပြီးငြိမ်နေသည်။သူမခုနက မဖြူတို့အခန်းသွားတော့ သူတို့တွေသောင်းကျန်းနေတာ အပြင်ကတောင်ကြားရတယ်လို့ပြောသည်။
သူလဲ တို့လဲအဲ့လိုသောင်းကျန်းရအောင်လေ လို့ပြောတော့ သူ့ကို ဆိတ်ဆွဲလိုက်ပြီး ဟင်းနော်လို့ပြောရာ သူလဲ ဖြူကျော့ဝေမေးစေ့ကိုမကာ နုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်သည်။ဖြူကျော့ဝေမျက်လုံးများမှိတ်သွားပြီး သု့ကို ဖက်လိုက်သည်။လျှာကိုပါးစပ်ထဲထည့်ကာ လျှာချင်းကလိလိုက်တော့ အသက်ရှူသံပြင်းလာသည်။အနမ်းရှည်တစ်ခုပေးပြီးတော့ အခန်းထဲသွားရအောင်ပြောပြီး ဖြူကျော့ဝေအခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်သည်။သူလဲအခန်းထဲရောက်တော့ ဖြူကျော့ဝေကိုနမးရင်းဖင်တွေကိုနယ်ကာ ကူတင်ပေါ်သို့ကန့်လန့်ဖြတ်လှဲချလိုက်ပြီးညဝတ်အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်ကာ ဘော်လီကိုချွတ်ပြီးနို့တွေကိုစို့လိုက်သည်။နို့လေးတွေက မထွားပေ။အကြမ်းပန်ကန်လုံးသာသာပင်။သူလဲအားနဲ့နို့တစ်ခုလုံးကိုအားနဲ့စုပ်ပြီးနို့သီးခေါင်းကိုလျှာနဲ့ကစားလိုက်ပြီးပေါက်တွေကိုညှစ်လိုက်ရာ ဖြူကျော့ဝေ ညည်းသံတစ်ခုထွက်လာပြီးခန္ဓာကိုယ့်မော့တက်သွားကာ သူ့ကို တင်းတင်းဖက်ထားသည်။သူလဲ လက်တစ်ဖက်က ညဝတ်ဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်ရာ ဖြူကျော့ဝေကလဲ ကာချွတ်ပေးလိုက်သည်။
တစ်ကိုယ်လုံးအဝတ်မရှိတော့ပေ။အစေ့တွေကို ကလိလိုက် အဖုတ်ထဲကိုကလိလိုက်လုပ်နေရင်းနဲ့ သူမ တစ်ချီပြီးသွားသည်ထင်သည်။အရမ်းကိုဟော့ပြီးငြိမ်သွားသည်။သူခဏနားပြီးဆက်ကလိပြန်ရာ ပြန်ပြီးစိတ်ထလာသည်။အဖုတ်ထဲကအရည်တွေကလဲ ရွှဲနေသည်။ဒါကြောင့်သူလဲ ညဝတ်အင်္ကျီနဲ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်ကာ အနားရှိထမိန်တထည်ယူပြီး ဖြူကျော့ဝေဖင်အောက်ကိုခင်းကာ ခြေထောက်တွေကိုမြှောက်ပြီးပေါင်ကိုကားလိုက်ရာ အဖုတ်ကဟတတလေးဖြစ်သွားသည်။အဖုတ်ဝမှာအရည်တွေနဲ့စိုနေသည်သူလဲလက်မနဲ့အစေ့ကိုချေလိုက်တော့ တွန့်သွားကာ ပေါင်ကိုပိုပြီးကားသွားသည်။သူလဲလက်မနဲ့လက်ညှိုးနဲ့အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကိုဖြဲလိုက်ရာအတွင်းသားပန်းရောင်လေးကလုပ်ချင်စရာ။လီးကို အဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး ဖိထည့်လိုက်ရာ အရည်တွေရြွှနေလို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ပင် တစ်ဝက်လောက်ဝင်သွားသည်။ဖြူကျော့ဝေ သူ့ရင်ဘတ်ကိုတွန်းထားကာ “အာ့ နာတယ် ယောက်ခမရယ် ဖြေးဖြေးအရမ်းနာတယ် ဟင့်ဟင်” သူလဲဖြေးဖြေးချင်းပြန်ထုတ်ကာ နို့တွေကိုချေပေးလိုက် အစေ့ကို ကလိလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးပြန်ထည့်လိုက်သည်။
ဖြေးဖြေးချင်းလုပ်နေရင်းနဲ့အရည်တွေထပ်ထွက်လာလို့ ထပ်ထပ်ထည့်ရင်း အဆုံးထိဝင်သွားသည်။သူမလဲ အတွေ့အကြုံရှိသူမို့ထင်သည်။အောက်ကနေအလိုက်သင့်နေပေးသည်။လီးကို သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ထုတ်ကာထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်ဆောင့်ရင်းခပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုက်ရာ ခံနိုင်လာသည်မို့ သူလဲတစ်ဝငးက်ကျော်ကျော်ထုတ်ကာ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ “အ့အ အ အင့်အင့်” “ဇွပ် ဇွပ် ဖတ်ဖတ် ဗြွတ်ဗြွတ်” “နာသေးလား ဖြူကျော့” “မနာတော့ဘူး ဆောင့်ဆောင့်” သူလဲ အားရပါးရဆောင့်နေလိုက်သည်။ဆောင့်ချက်တွေကြာလာတော့ဖြူကျော့ အဖုတ်ထဲမှ တင်းခနဲ တင်းခနဲ့ဖြစ်ကာ သူ့လီးကို ညှစ်ညှစ်လာသည်။သူလဲ ကျင်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားကာ မီးကုန်ယမ်းကုန်ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ဖြူကျော့ဝေ အားခနဲ့ အားခနဲအော်ဟစ်ပြီး သူ့လီးကိုဆက်တိုက်ညှစ်ကာ သူ့ကို အတင်းဖက်ထားပြီး ပြီးသွားသလို သူလဲ လီးတစ်ခုလုံး ပူခနဖြစ်သွားကာ သုတ်တွေက မထိန်းနိုင်ပဲ ပြီးသွားသည်။
မိန်းမနဲ့ဝေးနေတာနဲ့ သုတ်တွေကမနည်းလှပေ။နှစ်ယောက်သားဆန့်ငင်ဆန့်ငင့နဲ့ ထပ်လျှက်သား အမောဖြေနေကြသည်။တအောင့်ကြာတော့ သူစာပွဲပေါ်က တစ်ရှူးယူကာ ဖြူကျော့ဝေကိုပေးပြီး သူလဲ ယူကာ အဖုတ်ထဲက လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရာ ဗွက်ခနဲ သုတ်ရည်တွေက အဖုတ်ကတဆင့်ဖင်ကြားထဲသိုစီးကျသွားသဖြင့် ဖြူကျော့လဲ ကမန်းကတန်းတစ်ရှူးနဲ့သုတ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည်။သူလဲ လီးကိုပြောင်နေအောင်သုတ်ပြီး အမှိုက်ခြင်းထဲထည့်ကာ အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးကုတင်ပေါ်လှဲနေလိုက်သည်။ဖြူကျော့ဝေထွက်လာတော့ သူလဲ ဝင်ကာသေးပေါက်ပြီးလီးနဲ့လက်တွေကို ရေဆေးဆပ်ပြာတိုက်ကာသန့်ရှငးပြီးထွက်လာတော့ ဖြူကျော့ဝေအဝတ်တွေ ဝတ်ပြီးပြီ။သူလဲ အနားသွားကာ ဖြူကျော့ကို ဖက်လိုက်တော့ လူဆိုးကြီး သူ့သားနဲ့ပေးစားမယ်ပြောပြီး သူကအရင်စားတယ်ဟုပြောတော့ သူလဲ ရီနေလိုက်သည်။ရေခဲသေတ္တဖွင့်ကြည့်ရာ ဘီယာဘူးတွေတွေ့တာနဲ့ သောက်မလားမေးတော့ အင်းဆိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဘီယာသောက်ပြီး ရေခဲသေတ္တထဲက ချိစ်ဗူးယူကာမြည်းကြသည်။
သူက ရည်းစားနဲ့ ဘယ်နှစ်ခါဖြစ်ဖူးလဲမေးရာ မူးနေလို့လားမသိ သုံးလေးငါးခါတော့ရှိမယ်လို့ပြောသည်။သူ့ကိုလဲ မိန်းမတွေဘယ်လောက်လုပ်ဖူးလဲမေးတော့ မိန်းမ မရခင်က ရည်းစားတွေနဲ့လုပ်ဖူးကြောင်း မိန်းမရပြီးတော့ မလုပ်တော့ကြောင်းပြောရာ မယုံပါဘူးလို့ပြောလို့ သူကဘာနဲ့သက်သေပြရမလဲမေးရာ ရီနေသည်။ဘီယာတစ်ဗူးကုန်တော့ သူမကတစ်ဝက်လောက်သာသောက်နိုင်သည်။နည်းနည်းတင်သလိုဖြစ်တာမို့ သူလဲ စိတ်ပြန်ထလာကာ ဖြူကျော့ကို ဖက်ပြီးနမ်းလိုက်သည်။ဖြူကျော့လဲ သူ့လို့ပင်နေမည်။ပြန်ဖက်ကာ နမ်းသည်။သူ့လီးကို ကိုင်ကာ ဂွင်းထုပေးသည်။သူ့စိတ်က ပိုထန်လာပြီး ဖြူကျော့အဝတ်တွေချွတ်ရာ ဖြူကျော့ကလဲ သူ့အဝတ်တွေကိုပြန်ချွတ်ပေးသည်။ သူမကို လီးစုပ်ပေးလို့ပြောတော့ စုပ်ပေးသည်။သူမအဖုတ်က အရည်တွေနဲ့စိုနေပြန်သည်။သူလဲ ထန်ထန်နဲ့ အဖုတ်ကို ကလိုင်းပေးလိုက်သည်။နှစ်ယောက်သား ရမက်တွေတအားထန်လာကာ သူဖြူကျော့ကို ကုတင်စွန်းမှာလက်ထောက်ခိုင်ပြီး ကုန်းခိုင်းကာ နောက်ကနေ ဖင်ကိုဖြဲ အဖုတ်ထဲ ထည့်ကာ ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
မူးကလဲ မူးတော့ ရမက်တွေလဲ ကြူးနေကြသည်။ဆောင့်လိုးသံ တအင်းအင်းအော်ညည်းသံ အဖတ်ဖတ်ရိုက်သံတွေနဲ့အခန်းထဲမှာ ပျံ့လွင့်နေသည်။သူလိုးတာနာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ဆောင့်ချက်တွေက စက်သေနတ်ပစ်သလို မြန်လာပြီးသူပြီးသွားသည်။ဖြူကျော့ကတော့ နှစ်ချီဆက်တိုက်ပြီးရသည်လို့ပြောသည်။နှစ်ယောက်သား ဖလက်ပြကာ ရေပင်မဆေးနိုင်တော့ တစ်ရှူးနဲ့သာသုတ်ပြီး အဝတ်လဲမဝတ်နိုင်တော့ အိပ်ပျော်သွားကြသည်။မနက်လေးနာရီကျော်တော့ အေးလာတာနဲ့သူနိုးလာပြီးကြည့်တော့ ဖြူကျော့ကသူ့ဘေးနားမှာကွေးကွေးလေးအိပ်ပျော်နေသည်။သူလဲ အဝတ်ဝတ်ကာ ဖြူကျော့ကိုစောင်ခြုံပေးပြီး အခန်းကိုအထဲမှလော့ချခဲ့ကာ သူလဲသူ့အခန်းထပြန်ကာအိပ်လိုက်သည်။မနက် ရှစ်နာရီထိုးတော့ဖုန်းလာမှနိုးသည်။ကိုဇော်ဝင်း မနက်စာမစားဖူးလားလို့မေးတော့ သူလဲလာမယ်ဟုပြောပြီးရေအမြန်ချိုးကာ အဝတ်လဲပြီးထွက်လာခဲ့သည်။ဖြူကျော့ဝေကတော့မျက်နှာစူပုပ်နေကာ သူ့ကိုစကားမပြော။
သူပြုံးပြလိုက်တော့ မျက်စောင်းထိုးသည်။သူလဲပုခုံးတွန့်ကာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး မှာစရာရှိတာမှာကာ ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုမေးတော့ အနားတဝိုက်ကိုလည်မည်လို့ပြောသည်။စားပြီးတော့ ပိုက်ဆံရှင်းကာသွားကျတော့ ဖြူကျော့ဝေက မဖြူနားမှာအတင်းကပ်ကာသွားသည်။ကိုဇော်ဝင်းခမျာမျက်နှာကြီးရှုံတွနေပြီးသူ့ကိုမေးသည်။ “ဟိုကောင်မလေးက မင်းကို စိတ်ကောက်နေတာလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ” “သိဘူးလေ။ညကအကောင်းပဲ။ခုမှဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး” “ရှုပ်တယ်ကွာ မင်းဝင်လုံးပလိုက်ကြာလို့။ လိုအပ်နေတာကို ဝစ်စာပေါက်လေးထည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် ဟားဟားဟား”သူလဲသဘောကျပြီးရီလိုက်ရာ ရှေ့ကနှစ်ယောက်က လှည့်ကြည့်ပြီး ဖြူကျော့ဝေက မျက်စောင်းထိုး ခြေစောင့်ကာဆက်တောက်ဆက်တောက်နဲ့သွားသည်။ရယ်ဒီမိတ်အကျပ်အဝါရောင်လက်စကနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီအကြပ်ကိုဝတ်ထားသည်။မရှိမဲ့ရှိမဲ့ဖင်ကို လှုပ်ကာသွားနေသည်။သူကြည့်ရင်း အဲ့ကလေးမကို ဖင်ချချင်စိတ်ဖြစ်သွားရသည်။
ကိုဇော်ဝင်းက “မျိုးကို အဲ့ကောင်မလေးအိုးနဲ့ငါ့ဆော်အိုး ယှဉ်ကြည့်စမ်း ။အဲ့ကလေးမ ထည့်လိုက်ရရင် ထုတ်ချင်းတောင်ပေါက်မှာကြောက်ရတယ် ဟိဟိ” “အာ ခင်ဗျား ကြိတ်ကြံနေလားမသိဘူး။မကောင်းပါဘူးဗျာ။မဖြူတယောက်လုံးရှိတာ” “ငါကမင်းအတွက်ပြောတာ။စဉ်းစားမနေနဲ့ကိုယ့်လူ။အဆင်ပြေရင် ဆွဲသာစား။အရိုးတော့မကျိုးစေနဲ့ဟားဟားဟား” “လုပ်ပြီ။ခင်ဗျားတို့လဲနည်းနည်းတော့လျော့ဦး။တော်ကြာဘေးခန်းက ခဲနဲ့ပေါက်မယ်။ခဲနဲ့ပေါက်တာတော်သေး။ကုတင်ကျိုးကျနေမယ်။မဖြူလဲ အတော်ကျသွားသလိုပဲ ဟိဟိ” “ငါက လျှော့ပါတယ်ကွာ။ကိုယ်စောင့်နတ်က နှိုးဆော်နေလို့ခက်နေတာကွ” နှစ်ယောက်သားပေါက်ကရတွေပြောရင်းသွားနေကြသည်။ ဘုရားရောက်တော့ အဖွဲ့လိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကျသည်။ဘုရားရှိခိုးတော့ ကိုဇော်ဝင်းက သိသိသာသာပင် မဖြူလက်ကိုကိုင်ကာ ထွက်သွားတော့ သူနဲ့ဖြူကျော့ဝေကျန်ခဲ့သည်။ဖြူကျော့ဝေက သူ့ကို မျက်စောင်းထိုးပြီးထွက်သွားတော့သူလဲနောက်ကလိုက်ပြီး စကားပြောရာ ပြန်မပြောပဲ ကြာသာပတေးထောင့်မှာဘုရားရှိခိုးနေသည်။
သူလဲ ထိုင်ကာ ဘုရားရှိခိုးပြီး မိန်းမနဲ့ မမြင်ရသေးတဲ့ရင်သွေးလေးကိုမှန်းကာ ဆုတောင်းပေးလိုက်သည်။ပြီးတော့ ဖြူကျော့ဝေမရှိတော့ ။လိုက်ရှာတော့ တစ်ယောက်တည်းထိုင်နေတာတွေ့ရာ သူလဲကပ်ထိုင်လိုက်ပြီး ဘာဖြသ်နေတာလဲ မေးတော့မဖြေ။အတင်းမေးတာမရလို့ လူကြားထဲထဖက်ရမလားမေးကာမှ လန့်ပြီး “ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်မသိဘူးလား” “သိဘူးလေ” “ဘယ်ချိန်ထသွားတာလဲ။လူကို ဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်။ဟင်း သွားရင်နိုးသွားပါလား။နိုးတော့လန့်တောင်သွားတယ်။တကယ်ပဲဟွန်း” သူရီလိုက်ပြီး ချော့ရသည်။အိပ်ရေးပျက်မှာစိုးလို့မနိုးရက်လို့မနိုးတာဖြစ်ကြောင်းဆက်အိပ်နေချင်ပေမယ့် မနက်မဖြူတို့လာရင်သိသွားရင် သူမကို သိက္ခာကျမှာစိုးတဲ့အကြောင်းပြောရင်းချော့ရသည်။ဟန်ဆောင်ကာစိတ်ကောက်တာမို့ပြေသွားသည်။တော်တော်လေးကြာတော့မဖြူတို့ သူတို့ဆီလာသည်။ကိုဇော်ဝင်းက လက်မဖောင်ပြရာ သူလဲခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်သည်။လျှောက်သွားကြပြီး နေ့လည်စာကို နီးစပ်ရာဆိုင်မှာဝင်စားက ဟိုတယ်သို့ပြန်လာပြီး မဖြူတို့က သူတို့အခန်းထဲဝင်သွားသည်။
သူလဲ ဖြူကျော့ဝေအခန်းကိုတံခါးခေါက်ရာ လာဖွင့်ပေးတော့ အခန်းထဲဝင်လိုက်ပြီးတံခါးပိတ်လိုက်သည်။ဖြူကျော့ဝေက ဘာလာလုပ်တာလဲ ပြန်ထွက်လေ။မထွက်ရင် အော်လိုက်မှာနော်နဲ့ မူနေတာကြောင့်ဆွဲဖက်လိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းကို နမ်းကာကုတက်ပေါ်လှဲချလိုက်သည်။ပြီးတော့ အင်္ကျီကိုချွတ်ကာ ဘရာကိုပါတခါတည်းချွတ်ပြီးနို့တွေကို ပယ်ပယ်တယ်နယ်ညှသ်ပြီးနယ်ပလိုက်တော့ ကော့တက်သွားပြီး အသကရှူသံပြင်းလာသည်။ သူလဲနို့တွေကိုရေရေလည်စို့လိုက်ပြန်သည်။ ပြီးတော့ သူ့အင်္ကျီတွေ ဘောင်းဘီတွေချွတ်လိုက်ပြီးဖြူကျော့ဝေရဲ့ဘောင်းဘီအကျက်ကိုကြယ်သီးဖြုတ်ကာ ချွတ်လိုက်သည်။ဖြူကျော့ဝေလဲ ကူကာချွတ်လိုက်သည်။ အဖြူပေါ်မှာ အနီစင်းလေးတွေနဲ့အတွင်းခံသာကျန်တော့သည်။သူလဲအတွင်းခံပေါ်ကနေ အမြှောင်းတိုင်းလက်ညှိုးလက်ခလယ်နဲ့ဒေါင်လိုက်ဆွဲချလိုက်ရာ အင်းဟင်းဟင်း ညည်းသံရှည်ထွက်လာပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းစုလိုက်ချဲလိုက်ဖြစ်နေသည်။
ပြီးအတွင်းခံကိုချွတ်ကာ အစေ့တွေကို ဇိမ်ဆွကြာကလိပေးလိုက်သည်။ဖြူကျော့လဲ ပါးစပ်ကိုမစေ့နိုင်တော့ ပဲ တဟင်းဟင်းနဲ့။သူလဲ အတွင်းခံချွတ်ပြီးဖြူကျော့ကို လီးကိုင်ခိုင်းရာ ကိုင်ပေးပြီးဂွင်းထုပေးနေသည်။သူလဲအဖုတ်ထဲသို့ လက်ခလယ်ထို့ထည့်လိုက်ပြီးကလိပေးသည်။အရည်တွေတစိမ့်စိမ့်ကျနေသည်။လူလဲ တဟင်းဟင်းနဲ့ ဆောက်တည်ရာမရ။နောက်လက်ညှိုးပါ ထပ်ပြီးလက်နှစ်ချောင်းပူးကာအဖုတ်ကိုကလိပေးလိုက်သည်။အဖုတ်ထဲတွင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လက်ချောင်းတွေကို အတွင်းကြွက်သားတွေက ညှစ်ညှစ်လာပြီး သူ့လီးကိုဆုပ်ထားတဲ့လက်တွေက တင်းကြပ်လာကာ ပါးစပ်ကလဲ “အ ယောက်ခမ ရယ် ဟင်းဟင်းဟင်း အ အအား” အော်သံနဲ့အတူ တကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်ကာ ခြေချောင်းတွေကုပ်တက်လာပြီး ဖင်ကကော့တက်လာကာပြန်မကျတော့။တအောင့်နေမှ ဟင်းခနဲသက်ပြင်းချကာ ဖင်ကပြန်ကျသွားသည်။သူမ ပြီးသွားလေပြီ။ဖြူကျော့ သူ့ကိုထကာဖက်လိုက်သည်။
ပါးစပ်ကလဲဗလုံးဗထွေးနဲ့သူ့ကိုတင်းတင်းဖက်ထားသည်။သူလဲအထုတ်ထဲကလက်ကိုပြန်မထုတ်ပဲငြိမ်နေလိုက်သည်။ခနကြာတော့ “ဖြူကျော့””ဟင်” “ကို့ ကို လီးစုပ်ပေးကွာ” “အင်းစုပ်ပေးမယ်”ပြောသည်။သူလဲကုတင်ပေါ်ကဆင်းကာမတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး အနားကထမိန်ယူကာဖြူကျော့အောက်ကိုခင်းလိုက်ပြီး အဖုတ်ထဲကလက်ကိုထုတိလိုက်ရာ ဗွက်ခနဲ အရည်တွေကျလာသည်။ဖြူကျော့ကသူ့လီးကိုကိုင်ပြီး ကုန်းကာစုပ်ပေးလိုက်သည်။သူလဲအဖုတ်ထဲကအရည်တွေကိုကလော်ကာ ဖင်ဝကိုသုတ်လိုက်ပြီး ဖင်ဝကို ပွတ်ပေးလိုက်ရာဖင်က ရမ်းခါသွားတာကို သဘောကျပြီးဖင်ကိုထိန်းကာ ကလိပေးနေသည်။ဖင်ဝက စူပွပွဖြစ်လာသဖြင့်အဖုတ်ထဲကိုနှိုက်လိုက်သည်။ပြီးတော့ ဖင်ဝကိုကလိပြီးလက်ခလယ်နဲ့ဖင်ဝကိုဖိထောက်လိုက်ရာ လက်ကလဲအရည်တွေကရွှဲ ဖင်ဝကပွင့်နေချိန်ဖြစ် လို့လက်တစ်စစ်ခန့်ဝင်သွားသည်။တဆက်တည်းလက်တဖက်ကလဲ အဖုတ်ထဲကိုနှိုက်ကာ ကလိလိုက်သည်။ဖြူကျော့ အင်းအင်းနဲ့နေသည်။
ပါးစပ်က လီးကိုတော့အစုပ်မပျက်။လီးစုပ်ဖူးပုံရသည်။စုပ်တာကဝါမရင့်သေးပေမယ့်အဆင်တော့ပြေသည်။ဖင်အဖုတ်ကိုကလိရင်း ဖင်ထဲသို့လက်ကို ဖြေးညှင်းစွာ တရစ်ချင်းထည့်နေသည်။ဖင်ကို ကလိတာကို သဘောကျပုံရသည်။ဖင်ကိုပိုပိုကော့ပေးသည်။အဖုတ်ထဲမှအရည်တွေကလဲ ပိုပိုရွှဲလာကာ လက်ထည့်တိုင်းစွပ်ခနဲ စွပ်ခနဲမြည်နေသည်။ဖင်ထဲသို့ လက်ခလယ်တချောင်းလုံးဝင်သွားတော့ သူအသာလေးပြန်ထုတ် ပြန်ထည့်နဲ့ အဖုတ်ကထုတ်ဖင်ထဲထည့် ဖင်ထဲကထုတ်အဖုတ်ကထည့်လုပ်ပေးနေသည်။လီးစုပ်ချက်တွေကလဲ ပြင်းလာသည်။သူလဲ “ကဲ ဖြူကျော့ ကို လိုးချင်ပြီကွာ”ပြောလိုက်ရာ လီးကို ချွတ်ကာ သူ့ကို ရမက်တွေထနေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ သူက ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ဖြူကျော့ ကုတင်ပေါ်တွင်ကုန်းပေးလိုက်ရာ သူလဲ အဆင်ပြေအောင် ပြင်ပြီး အဖုတ်ဝကိုလီးနဲ့ထောက်ကာ ဖင်တွေကုလက်နဲ့ကိုက်ပြီးလီးကိုဆောင့်ထည့်လိုက်ရာ အားခနဲတချက်အော်ကာ ခါးကော့သွားပြီး ဟင့်ဟင့်နဲ့ဖြစ်သွားသည်။
လီးကို ညှစ်လာသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ခါးကိုကိုင်ပြီးသူလဲ ဆောင့်ဆောင့်ပေးရာဖြူကျော့ကလဲနောက်ကိုပြန်ပြီး ကော့ကော့ပေးသည်။ဆောင့်ချက်က ကြာလာတော့ သူ့ရဲ့လီးကိုတင်းကြပ်စွာ ညှစ်လာပြန်သည်။ အစားထိုးချစ်သူ(၂) သူလဲ ပြီးချင်လာပြီမို့ ခါးကို တင်းတင်းကိုင်ကာ တရစပ်ဆောင့်ပစ်လိုက်ရာ “အင့် အင့် အင့် ဆောင့်ဆောင့် ဖြူကျော့ပြီးတော့မယ် ယောက်ခမ ဆောင့်ပါနာနာဆောင့် အင့်အင့်” “ကောင်းလား ဖြူကျော့ ခံလို့ကောင်းလား” “ကောင်းတယ် အရမ်းကောင်းတယ် ယောက်ခမရောကောင်းလား” “ကောင်းတယ်” ပြောရင်းဆက်တိုက်ဆောင့်နေရာအချက်နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်တွင်သူ့လီးကိုညှစ်ညှစ်နေတော့သည်။သူလဲ ပြီးလုပြီးခင်မို့ မညှာတော့ ။အားရပါးရကို ဖင်ကိုတင်းတင်းကိုင်ကာ လီးကိုတဆုံးထုတ်ပြီးတရှိန်ထိုးဆောင့်ဆောင့်ချလိုက်ရင်း ပြီးသွားသည်။နှစ်ယောက်သားတအင်းအင်းနဲ့ထပ်ရက်ကုန်းကုန်းကြီး မှိန်းနေသည်။ပြီးတော့မှ ဖြူကျော့က တအိအိလဲကျသွားရာသူပါဖြူကျော့အပေါ် ထပ်ရက်ကျသွားသည်။ဖြူကျော့ကိုနမ်းလိုက်ပြီးဆံပင်တွေကိုဖွကာ မှိန်းနေလိုက်သည်။
တအောင့်နေမှ ဘေးသို့လှိမ့်ချလိုက်ရာ ဖြူကျော့က သူ့အောက်ကထမိန်ကိုယူကာသူ့အဖုတ်ကိုသုတ်လိုက်ပြီးသူ့လီးကိုလဲသုတ်ပေးသည်။ “ဟင့် အကြီးကြီးပဲ လီးကြီးက။သူ့မိန်းမ တော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး။ဒီမှာတော့ သေတော့မယ်ဟင့်” “ကောင်းတယ်မှတ်လား ကြီး တော့” “ကောင်းဘူး” “ကောင်းပါတယ်” “ကောင်းပါဘူး” ကျီစယ်နေကြသည်။သူမက သူ့ကို ယောက်ခမ သာ ခေါ်သည်။ခင်စက အကို ဘာညာခေါ်သေးသည်။သူ့မိန်းမကိုယ်ဝန် လွယ်ထားမှန်းစကားစပ်မိလို့ပြောကတည်းက သူ့ကို ယောက်ကျားလေး မွေးရင် ယောက်ခမ တော်မယ်ဆိုပြီး ယောက်ခမပဲခေါ်တော့ရာ နှုတ်ကျိုးနေပြီထင်သည်။သူတို့စနောက်နေပြီး ခနနေတော့ ဖြူကျော့ ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားရာ သူပါလိုက်ဝင်သွားတော့ ဖြူကျော့က သူ့ကိုရေနဲ့ပက်ကာစသည်။သူလဲ ပြန်စရင်းတစ်ယောက်နဲ့တယောက်ဖက်ကာနမ်းကြပြီး ပြန်ထလာကာ ရေချိုးခန်းထဲတွင် ဖြူကျော့ကို နံရံကို ကပ်ကာ ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကနေ လိုးသည်။
ဖြူကျော့လဲ လို့းတဲ့အရသာကို ကြိုက်လို့လားဘာလားမသိ၊ သူလုပ်သမျှခံသည်။တစ်ချီပြီးသွားတော့ သူ့လီးကိုကိုင်ကာရေဆေးပေးသည်။သူလဲဖြူကျော့ကိုဆေးပေးလိုက်သည်။ပြန်ထွက်လာကာအဝတ်ပြန်ဝတ်ပြီး သူ့အခန်းပြန်မယ်လုပ်တော့ မပြန်နဲ့တဲ့ သူနဲ့နေဆိုလို့ သူလဲကုတင်ပေါ်တွင်သူမကိုဖက်ကာ နားလိုက်ရင်းအိပ်ပျော်သွားကြသည်။ညနေကျ ဖြူကျော့က သူ့ကိုနိုးသည်။မဖြူတို့ဖုန်းဆက်တယ် သူတို့ရေသွားကူးကျပြီတဲ့။သူလဲ ထကာ သူ့အခန်းပြန်ပြီး အဝတ်လဲကာထွက်လာတော့ ဖြူကျော့လဲ အဝတ်လဲပြီးထွက်လာလေသည်။သူတို့နှစ်ယောက် အတူရေထဲသို့ဆင်းကြသည်။ တစ်နာရီလောက်ရေဆော့ပြီးပြန်တက်လာအခန်းပြန်ရေချိုး အဝတ်လဲကာ ညနေစာထွက်စားကြရာ ဒီတစ်ခါတော့သူကျွေးသည်။ဒီညအစီအစဉ်မေးတော့ ကိုဇော်ဝင်းက ဘာအစီအစဉ်မှမရှိ မနက်ပြန်ရမှာမို့ လက်ဆောင်လေးတွေလိုက်ဝယ်ရင်း စောစောနားမယ်အချိန်ရှိခိုက်လုံ့လစိုက်မလို့ဟေ့ဟုပြောရာ မဖြူကရှက်ပြီးကိုဇော်ဝင်းကို ထုရိုက်နေရာ သူတို့ရီလိုက်ကြသည်။စားသောက်ပြီး လက်ဆောင်တွေလိုက်ဝယ်ကြပြီး ဟိုတယ်သို့ပြန်လာကြသည်။
သူတို့လဲ မနက်ပြန်မှာမို့ သိမ်းစရာတွေသိမ်းထားလိုက်ကြသည်။ဖြူကျော့က လမ်းလှောက်ချင်တယ်ဖုန်းဆက်တော့ သူတို့တွေလမ်းလျှောက်ဖြစ်ကြသည်။လမ်းလျှောက်ရင်းဖြူကျော့က သူ့ကိုမှီကာလျှောက်သည်။ချစ်သူစုံတွဲတွေလိုပင်။ဖြူကျော့ကို သူကအမှန်တိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေဖို့နဲ့ သူလဲဖြေမယ်ဆိုပြီးစကားခံကာ သူနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုခံစားရလဲမေးရာ သူမကလဲ တခါမှမရဘူးတဲ့ ခံစားမှုကိုရပြီးအရမ်းကိုကောင်းမွန်သည်။သူအရမ်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေပြီးသူ့ကိုလဲ မေးရာ သူလဲကောင်းတယ် ဖြူကျော့က အပေးကောင်းတယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ဖူးလဲမေးတော့ နှစ်ယောက်ဟုပြောသည်။သူဆယ်တန်းအောင်ပြီးစမှာသူနဲ့အတန်းတူကောင်လေးနဲ့ဖြစ်ကာ ပထမနှစ်ရန်ကုန်ကိုသူကကျောင်းတက်တော့ သူ့ကောင်လေးက ဗိုလ်သင်တန်းတက်သည်။ပထမနှစ်ပြီးတော့ တောင်ငူကိုပြန်လာကာတွေ့ကျတော့ ဖြစ်ကြသည်။နောက်ပြန်သွားပြီး သူလဲဒုတိယနှစ်ပြန်လာတက်တော့ ခုကောင်လေးနဲ့ထပ်ကြိုက်ကာ နောက်ဆုံးနှစ်မှ တည်းခိုခန်းတွင် ခေါ်သွားကာလုပ်ဖြစ်ကြသည်။
နောက်ပိုင်းကျောင်းပြီးတော့ သူလဲတောင်ငူသို့ပြန်လာလို့ထပ်မတွေ့ဖြစ်။အလုပ်ဝင်တော့မှ ရန်ကုန်သို့တစ်ခါတစ်ခါလာကာတွေ့ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။သူ့က သူမကို သူ့ကိုချစ်လားမေးရာ “အမှန်တိုင်းပြောရရင်ယောက်ခမကို တွေ့စက စိတ်ဝင်စားမိတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ မိန်းမရှိမှန်းသိတော့ စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ စကားပြောရတာစရ နောက်ရတာတွေကိုသဘောကျတယ်။အရမ်းတော့ခင်တယ်။မချစ်ဘူး။ဒါပေမယ့် ခုတော့ကြိုက်တယ် ယောက်ခမကရော” “ကိုလဲ ဖြူကျော့ကို မချစ်ဘူးသဘောမကျဘူး။ဒါပေမယ့် ဖြူကျော့နဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရတာကို ကြိုက်တယ်။ပွင့်လင်းတယ် အပေးအယူမျှတယ်။ဒီလိုဆို တို့တွေက ချည်နှောင်မှုမရှိတော့ ဖြူကျော့ စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ကို့ကိုပြော ကိုယ်ဖြည့်ဆည်းပေးမာ်။ကို စိတ်ပါရင်လဲ ဖြူကျော့ကဖြည့်ဆည်းပေး အခက်အခဲရှိရင်နားလည်ပေးကြေး။ဘယ်လိုလဲ” “ok ကြိုက်တယ်။လောလောဆယ်ကျန်တာတွေမေ့ထားပြီး ခုချစ်သူတွေလိုနေကြရအောင်” စကားတွေပြောကြရင်း နှသ်ယောက်သားပြန်လာကြသည်။သူတစ်ခွန်းတော့ပြောလိုက်သည်။
ဖြူကျော့ရဲ့ဖင်ကိုတော့ လိုးချင်တယ်ဟု။ဖြူကျော့က ပုခုံးတွန့်သွားပြီး အမလေးသူ့ဟာကြီးက အကြီးကြီးနဲ့ ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးရီနေသည်။အခန်းထဲရောက်တော့ နှစ်ယောက်သားအရင်ကထက် ပွင့်လင်းလာသည်။နည်းမျိုးစုံလိုးကြသည်။တစ်နာရီကျော်တော့မှအိပ်ကြသည်။မနက်ခြောက်နာရီကျော်တော့ နိုးလာကြပြီးသူလဲအခန်းထပြန်ကာ ရေချိုးအဝတ်လဲ သိမ်းဆည်းပြီးဟိုတယ်ဧည့်ခန်းတွင်ကိုဇော်ဝင်းတို့ကိုစောင့်နေသည်။ခနကြာတော့သူတို့အတွဲဆင်းလာကြသည်။ညကဘယ်လောက်ကဲကြသည်မသိ။ မဖြူမျက်တွင်းတွေညိုကာ နားထင်တွေချိုင့်နေသည်။ဖြူကျော့လဲ ဒီတိုင်းပင်။သူတို့ဟိုတယ်ခရှင်းကာ မနက်စာစားပြီး မော်လမြိုင်သို့ပြန်လာကြသည်။မော်လမြိုင်ရောက်တော့ လျှောက်လည်ကာ ညနေတွင် ဖြူကျော့ကို ကားဂိတ်လိုက်ပို့ကြသည်။ဖြူကျော့က ပြန်သွားသည်။သူလဲ ကိုဇော်ဝင်းနဲ့တူတူ မဖြူကိုလိုက်ပို့ပြီးဘီယာဆိုင်ဝင်ကာ သောက်ကြသည်။
ကိုဇော်ဝင်းက သူလဲမနက်ကျ သူ့ရွာသို့ပြန်ပြီးမိဘတွေဆီခဏပြန်ကာ စလုံ့ပြန်တော့မည် နှစ်နှစ်ခန့်လုပ်ကာ မဖြူကို ယူမယ်ပြောတော့ သူလဲ အားပေးသည်။ချစ်ရသူချင်းမနီးစပ်သေးတော့ သူကိုယ်ချင်းစာသည်။ကိုဇော်ဝင်းမျက်နှာက လွမ်းဆွေးနေသည်။စကားလုံးတွေက ဆွေးနေသည်။သုံးရက်တာ ကာလကိုပြန်တမ်းတနေသလိုပင်။သူတို့တော်တော်မူးခါမှ တည်းခိုခန်းပြန်လာသည်။မနက်ကျ ကိုဇော်ဝင်းကလဲ သူ့ရွာသို့ ပြန်ကာ သူလဲ ဘာအံသို့ပြန်လာသည်။ပြန်ရောက်တော့ အလုပ်တွေကိုပြန်ပြီး ကြပ်မတ်ရပြန်သည်။ရုံးကိုသတင်းပို့ပြီး မိန်းမဆီဖုန်းဆက်ရသည်။ အလုပ်တွေနားတော့မှ ဖြူကျော့ဆီဖုန်းဆက်လိုက်သည်။တနေကုန် လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်ကာ ညနေကျ အဆောင်ပြန်လာပြီးရေချိုးအဝတ်လဲကာ အဆောင်က ချာတိတ်တွေနဲ့အပြင်ထွက်ထမင်းစားပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သည်။ပြီးအဆောင်ပြန်လာကာ စာရင်းတွေလုပ် မိန်းမဆီဖုန်းဆက် အားတော့ လိုင်းသုံးကာ ဖြူကျော့နဲ့ စကားပြောသည်။
တစ်လလောက်ကြာတော့ ဖြူကျော့က ဘာအံလာလည်မယ်ပြောရာသူလဲလာခဲ့စရိတ်အကုန်ခံမယ်။ဒီမှာလဲ ကုန်ကျစရိတ်ခံမယ်လူသာလာခဲ့လိူ့ပြောတော့ သူမက မသိတာမှတ်လို့ ဟင်းဆိုပြီးပြောသည်။နောက်တစ်ပတ်သောကြာညလာမယ်ဟုပြောသည်။သေချာရင် ဟိုတယ်ကိုချိတ်ထားလိုက်မယ်ပြောလိုက်သည်။ သောကြာနေ့ညနေကျဖြူကျော့က သူ့ဆီဖုန်းဆက်သည်။ကားဂိတ်မှာတဲ့။သူလဲခရီးစဉ်ကိုပြောပြကာဘယ်ရောက်ရင်ဖုန်းဆက်ဖို့မှာလိုက်သည်။သူလဲသူရင်းနှီးတဲ့ဇွဲကပင်ဟိုတယ်ကိုဖုန်းဆက်ကာ အခန်းမှာထားလိုက်သည်။ညဖက်ကျမိန်းမဆီဖုန်းဆက်အကျိုးအကြောင်းမေးကာ နောက်တစ်ပတ်ပြန်လာမယ်လို့ပြောလိုက်သည်။ဖြူကျော့ဆီဖုန်းဆက်ရာလမ်းမှာဘယ်နေရာမှန်းတော့မသိတဲ့။သူလဲစကားအတန်ကြာပြောပြီး ဖုန်းချကာနိုးစက်ပေးပြီးအိပ်လိုက်သည်။မနက် လေးနာရီနိုးစက်မြည်တော့ အိပ်ရာထမျက်နှာသစ်ကာ အဝတ်လဲပြီး အဝတ်နှစ်စုံလောက်ကို အိတ်ထဲထည့်ကာ အားဆေးတစ်လုံးကိုသောက်လိုက်ပြီး ကားသော့ယူကာ ကားနဲ့ထွက်လာလိုက်ပြီးဖြူကျော့ဆီဖုန်းဆက်တော့ တံတားကိုဖြတ်နေပြီဟုပြောသည်။
သူလဲ ဇွဲကပင်ဟိုတယ်ရှေ့တွင်ကားရပ်ကာစောင့်နေလိုက်သည်။ခနကြာ တော်ဝင်ကား ရောက်လာပြီးသူ့ကားနားတွင်ရပ်လိုက်သည်။သူလဲကားနားသို့သွားရာဖြူကျော့ကားပေါ်ကဆင်းလာသည်။သူလဲအိတ်ကိုလှမ်းယူကာဖြူကျော့ကိုကြိုလိုက်သည်။ကားကပြန်ထွက်သွားတော့ ဖြူကျော့ကိုသူ့ကားပေါ်တက်ခိုင်းပြီး ဟိုထဲဝင်လိုက်သည်။အခန်းသော့ယူကာ ဧည့်ကြိုကောင်လေးက သူတို့ကို လုံးချင်းဘန်ကလိုဖက်လိုက်ပို့သည်။အခန်းထဲပစ္စည်းထားကာအခန်းသော့ပေး အခန်းတံခါးပိတ်ပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။သူလဲ ဖြူကျော့ကို ဖက်လိုက်ပြီးနမ်းလိုက်သည်။ပြီးတော့ အပေါ်ကအနွေးထည်အပါးကိုချွတ်ကာ အင်္ကျီကိုချွတ်ရင်းဘော်လီချိတ်ကိုပါဖြုတ်ပြီး ချွတ်ကာ နို့တွေကိုနယ်ပေးလိုက်သည်။ဖြူကျော်ကလဲ အားကျမခံ သူ့အင်္ကျီတွေချွတ်ကာ ပုဆိုကိုချွတ်ပြီးအတွင်းခံထဲနှိုက်ကာ လီးကိုင်ပြီးဂွင်းထုပေးသည်။ပြီးတော့အတွင်းခံကို ချွတ်လိုက်ကာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူ့ကို လွေတော့သည်။
စုပ်ချက်တွေကမာန်ပါလှသည်။အတွေ့အကြုံများလှတဲ့သူတောင် ကြုံ့ကြုံသွားရသည်အထိကောင်းလှသည်။ဘယ်လိုတွေကျင့်ထားသည်မသိ။သူလဲပြီးသွားမှာစိုးကာ ဖြူကျော့ကိုထူလိုက်ပြီးကုတင်ပေါ်လှဲကာစတိုင်ပန်အကျပ်အနက်ကို ချွတ်လိုက်တော့ ပင်တီပန်းရောင်လေးမှာ ကွက်ကာစိုနေသည်။သူမဘယ်လောက်ထန်နေသည်မသိပေ။သူလဲပင်တီကိုဆက်ကာချွတ်ပြီး ပေါင်ကိုဖြဲကာအစေ့ကို လက်မနဲ့လှိမ့်ကာနို့တွေကိုစို့လိုက်သည်။ “အား ရှီးကောင်းလိုက်တာကွာ။ယောက်ခမရယ် ယောက်ခမကို သတိရနေတာ ဟင့် ရှီး ” သူလဲအစေ့ကိုကလိရင်းလက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူးကာ အဖုတ်ထဲသို့ဖိကာထည့်လိုက်သည်။ကျဉ်းကျပ်စွာတိုးဝင်သွားတော့ နာတယ် ဖြေးဖြေးဟုပြောသညိ။သူလဲ ထန်နေသည်။အဖုတ်ထဲကိုရောက်တော့ ပြန်ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်လုပ်ရာအရည်တွေကထွက်လာလို့အဝင်အထွက်ချောလာသည်။ဖြူကျော့က “ယောက်ခမ မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ လုပ်ပေးတော့” သူလဲ ဖြူကျော့ကိုထူကာသူက ပက်လက်လှန်ပြီးအပေါ်ကနေဆောင့်ခိုင်းရာ ဖြူကျော့က အပေါ်ကနေ လီးကိုကိုင်ကာအဖုတ်ဝတွင်တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်သည်။
“အာ့ ရှီး ကြီးလိုက်တာကွာ ဟင့် သူ့လီးကြီးက အထဲမှာပြည့်ကျပ်နေတာပဲ။ဟင့်” သူလဲနို့တွေကိုကိုင်ကာ နို့သီးခေါင်းကို ချေပေးနေသည်။ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချလိုက်ပြန်ကြွလိုက်လုပ်နေသည်။တဖြေးဖြေးအဝင်ချောလာတော့ နည်းနည်းသွက်လာသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆောင့်တာကြမ်းလာသည်။လက်တွေက သူ့နို့သူကိုင်ကာ ချေနေသည်။သူကတော့ ခါးကိုကိုင်ကာ အောက်ကနေအလိုက်သင့်ကော့ပေးနေသည်။မျက်လုံမှိတ် နို့တွေကိုင်ပြီးဆောင့်နေသည်မှာ ကြည့်ကောင်းလှသည်။ညည်းသံတွေက တချက်တချက် ကျယ်လောင်စွာပေါ်လာသည်။ပုခုံးကျော်လောက်ရှိပြီးရွှေအိုရောင်ဆိုးကာ အောက်ခြေနားတွင် အလိပ်အလိပ်တွေကောက်ထားတဲ့ဆံနွယ်တွေက ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာလေထဲလွင့်နေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက အရိုင်းဆန်လာကာ မြန်ဆန်လာပြီး အဖုတ်ထဲကကြွက်သားတွေကညှစ်ညှစ်လာကာ ပါးစပ်ကလဲ အူးအူးအားအားနှင့်အော်ရင်းသူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှောက်ကျလာသည်။
သက်ပြင်းမောတွေချရင်း တအင်းအင်းနဲ့ညည်းနေသည်။သူလဲ ကျောပြင်ကိုပုတ်ကာ နှစ်သိမ့်နေသည်။အသက်ရှူသံ မှန်လာတော့ သူ့ကို ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီးနောက်ကနေ ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ဒီတစ်ခါသူ့အလှည့်။သူမတချီကောင်းကောင်းပြီးထားသည်မို့ သူလဲအားမနာ။စိတ်ကြိုက်ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။သူမလဲ သူ့ရဲ့ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပြန်ပြီးစိတ်ပါလာကာ သူနဲ့အပြိုင် ဆောင့်သည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်ယောက်သား အကျောတွေတင်းတောင့်လာပြီး ပြီးသွားကြသည်။ပြိုင်တူလိုလိုပြီးသွားရသည်။နှစ်ယောက်သားအမောဖြေကာ ရေချိုးခန်းဝင်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲက တပတ်တွေကိုပတ်ပြီးအိပ်လိုက်ကြသည်။မနက်ရှစ်နာရီကျော်တော့ နိုးလာကြကာ ရေချိုးအဝတ်လဲကာ မနက်စာသွားစားကြသည်။ပြီး သူမကို ဘားအံနားရှိ ကော့ကသောင်ဂူသို့လိုက်ပို့သည်။ပြီးတော့ပြန်လာကာ နေ့လည်စာစားပြီးဟိုတယ်ပြန်လာကာ လိုးကြသည်။ပြီး ခနနားကာ ဇွဲကပင်တောင်သို့ လိုက်ပို့ပေးသည်။
ညနေပြန်ရောက်တော့ ရေချိုးအဝတ်လဲကာ ထိုင်းစတိုင် စားသောက်ဆိုင်သို့သွားကာ ထိုင်းစာလိုက်ကျွေးလိုက်သည်။သူမကိုကောက်တေးအချိုမှာပေးကာတိုက်သည်။သောက်ကြည့်တော့ကြိုက်သွားပြီးထပ်ကာသောက်သည်။သူက မူးနေမယ်တားပေမယ့်မရ။ဖြေးဖြေးချင်းတက်လာရာ စားပြီးချိန်တွင်တော့ မူးနေပြီ။သူကကေတီဗွီသွားချင်လားမေးရာ သွားမယ်ဆိုလို့သွားကာသီချင်းဆိုကြသည်။ဒစ်စကိုတွေဖွင့်ကာ ဖြူကျော့ကတော့ မူးကလဲမူးနေတော့ မြူးနေသည်။ကနေသည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီ အကြပ်ပေါင်လည်သာသာအတိုအောက်က ဖင်တွေကိုယမ်းကာကနေတာကို သူညစ်ညစ်နဲ့ထိုင်ကြည့်နေလိုက်သည်။သူ့ပါဆွဲထူကာ ကခိုင်းနေလို့ ကရသေးသည်။လတ်ပြတ်အင်္ကျီအနီအကြပ်ပေါ်မှာ ဂျင်းကုတ်အတိုဝတ်ထားပြီးဝေါကင်းရှူးအဖြူအတိုဝတ်ကာ ကနေတဲ့ဖြူကျော့ပုံစံက အဆိုတော်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တောင်သူသေးသည်။တစ်နာရီပြီးတော့ဟိုတယ်သို့ပြန်လာရာကချင်သေးတယ်လို့ဂျီတိုက်နေသေးသည်။
သူလဲချော့မော့ပြီးခေါ်လာကာ အခန်းရောက်တော့ တံခါပိတ်လိုက်ပြီးဖြူကျော့ကိုပွေ့ချီလိုက်ကာ ကုတင်ပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းလိုက်သည်။လက်တွေကအဝတ်တွေပေါ်ကနေနို့တွေကိုဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သည်။ပြီး အင်္ကျီကိုလှန်ကာဘော်လီကိုမတင်ပြီးနို့တွေကိုအားနဲ့စို့လိုက်တော့ ဖြူကျော့လဲ ငြိမ်သွားသည်။ပေါင်တွေကိုပွတ်သပ်နေရင်းတင်ပါးတွေကိုဖြစ်ညှစ်လိုက် နိုးတွေ့ကိုစို့လိုက်လုပ်နေသည်။ ဖြူကျော့က သူ့အင်္ကျီကိုမကာချွတ်ပေးပြီး ရင်ဘတ်တွေကိုပွတ်သပ်နေသည်။သူလဲအသာထကာဘောင်းဘီကိုချွတ်ချလိုက်သည်။ပြီး ဖြူကျော့အင်္ကျီတွေကိုပါချွတ်ပြီး ဝေါ့ကင်းရှူးကိုမချွတ်တော့ပဲနဲ့ဘောင်းဘီတိုကိုချွတ်လိုက်သည်။ကျပ်နေလို့ခက်ခက်ခဲခဲချွတ်လိုက်ရသည်။ပင်တီအနီရောင်ပေါ်ကနေလက်တွေနဲ့ကလိလိုက်ကာချွတ်လိုက်သည်။ပြီးဖြူကျော့ကိုပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်ပြီး ခေါင်းကိုကုတင်အစွန်းကိုထားကာသူ့လီးကိုပါးစပ်နားတေ့ပေးရာဖြူကျော့ကလီးကိုကိုင်ပြီးစုပ်ပေးလိုက်သည်။
သူလဲအစေ့ကိုချေလိုက်ရာအွန်းခနဲ့ပေါင်ကကားသွားသည်။လက်တစ်ဖက်က နို့ တွေနဲ့ကိုနယ်ရင်း အဖုတ်ကိုရွေ့ကာအဖုတ်ထဲနှိုက်လိုက်သည်။အစေ့ကိုချေအဖုတ်ကိုနှိုက် ပါးစပ်ကိုလိုးနေလိုက်သည်။လူတွေကလဲမူးနေတော့ စိတ်တွေက ပိုကြွနေကြသည်။မျိုးကိုလဲစိတ်ထဲမှာလုပ်ချင်တာတွေကိုမူးမူးနဲ့ လုပ်ပစ်လိုက်သည်။ဖြူကျော့ကလဲ မူးနေတော့ စိတ်တွေကကြွသူလဲလီးကိုအားကြိုးမာန်တက်စုပ်ဖင်ကိုလဲကော့ကော့ပေး။အဖုတ်ကိုကလိနေတဲ့လက်ကိုထုတ်လိုက်တော့ အရည်တွေနဲ့ရွှဲနေပြီးဖင်ဝကိုဆွလိုက်ပြန်သည်။လက်ခလယ်နဲ့ဖင်ဝကိုကလိနေရင်း ဖင်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တော့ ဖင်က ရမ်းသွားသည်။လက်ကိုဖင်စအိုကြွက်သွားတွေက ညှစ်ထားရာ သူလဲအစေ့ကိုထပ်ပြီးချေလိုက်တော့ ပေါင်က ကားသွားပြီး သူလဲထပ်ထည့်လိုက်သည်။လက်တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားတော့ ပြန်ထုတ်ပြန်ထည့်လုပ်နေရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဝင်ကအဆက်ပြေလာသည်။
သူလဲလက်ညှိုးကိုအဖုတ်ထဲထည့်လိုက်ပြီးပြန်ထုတ်ကာ လက်ညှိုလက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူးပြီးဖင်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြန်သည်။ဖြူကျော့ ထွန့်ထွန့်လူးသွားရပေမယ့် လီးကိုအစုပ်မပျက်ပေ။ကလိနေတာတွေရပ်လိုက်ကာ ပါးစပ်ထဲမှလီးကိုထုတ်လိုက်ပြီးဖြူကျော့ကိုထူလိုက်ကာ သူ့အပေါ်ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။ဖြူကျော့လဲ အပေါ်ကနေ ဆောင့်ဆောင့်ပေးနေသည်။ “အ အ ယောက်ခမရယ် ကောင်းလိုက်တာ နို့တွေကိုကိုင်ပေးပါ အ အ” သူနို့တွေကိုအုပ်ကာညှစ်လိုက်ချေလိုက်ခပ်ပြမ်းကြမ်းလုပ်သည်။ဖြူကျော့ကလဲအပေါ်နေခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ရင်းနဲ့ တစ်ချီပြီးသွားရသည်။သူလဲဖြူကျော့ပြီးသွားတော့ အပေါ်ကနေ ဖြူကျော့ရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်တင်ကာ တရစပ်ဆောင့်ဆောင့်ပေးလိုက်ပြန်သည်။တစ်ချီပြီးလို့မှမဆုံးသေး နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးစိတ်ကြွလာပြန်ရာ ဖင်တွေကိုကော့ကာခံပေးသည်။သူတို့နှစ်ယောက်က တဏှာကိုသာအခြေခံကျတာမို့ ကျန်တဲ့ချည်နှောင်မှုတွေမပါ ဒါတစ်ခုတည်းသာပင်။
အခုလဲ မူးကလဲမူး စိတ်တွေကထန်နေကြတာမို့ အခန်းထဲမှာ လိုးသံ အသားချင်းရိုက်သံ အော်ဟစ်ညည်းသံတွေသာပျံ့လွင့်နေသည်။ဖြူကျော့ဝေက လူကောင်ကသာသေးသော်ငြား မျိုးကိုရဲ့ အကြမ်းပတမ်းဆောင့်ချက်တွေကို ခံနိုင်သည်။မျိုးကိုကလဲ ညင်သာမှုမရှိတော့ပဲ တရစပ်ဆောင့်နေရာ ဖြူကျော့ဝေတကိုယ်လုံး လှုပ်ရှားနေပြီး မုန်တိုင်းကြားထဲက လွန့်နေတဲ့လှေလိုပင်။ဆောင့်ချက်များကကြာလာသည်နဲ့အမျှ နှစ်ယောက်လုံးပန်းတိုင်ဆီရောက်လုပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူကျော့တစ်ယောက် အသံရှည်နဲ့ညည်းညူလိုက်ပြီးငြိမ်သက်သွားသလို မျိုးကိုလဲ ဆောင့်ချက်များက နှေးလာပြီး အား ခနဲတစ်ချက်အော်ကာ ဖြူကျော့ဝေပေါ်သို့ မှောက်ကျသွားသည်။မောဟိုက်နေကြပေမယ့် မျက်နှာမှာတော့ ကျေနပ်မှုရှိနေတဲ့ပုံ။အရမ်းကောင်းနေသည်။နှစ်ယောက်သားငြိမ်သက်စွာ နားနေပြီးမှ မျိုးကို ကလီးတပ်လျက်သားဖြူကျော့ကိုပွေ့ကာ ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်သွားပြီးရေချိုးခန်းထဲရောက်မှ အောက်သို့အသာချကာ အဖုတ်ကို ရေဆေးပေးသည်။
ဖြူကျော့ကလဲ လီးကိုရေဆေးပေးလိုက်သည်။ရေဆေးနေကြရင်းနဲ့တစ်ယောက်ကိုတယောက် ကလိနေကြသည်။အမူးရှိန်က ကျလာသည်။ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာပြီးအဝတ်တွေမဝတ်တော့ပဲ ရေခဲသေတ္တထဲက ဘီယာနှစ်ဘူးထုတ်ကာ သောက်လိုက်ကြသည်။နောက်ထပ်တစ်ခါလိုးကြပြန်သည်။ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လုပ်ကြသည်။တစ်ချီပြီးသွားသည်မို့ မျိုးကို သုတ်ရည်ထိန်းနိုင်သွားသည်။ဖြူကျော့ကလဲလူသာငယ်ပေမယ့် ဇကမသေး။လုပ်သမျှကိုခံနိုင်သည်။သူလာတာလဲ ဒီရည်ရွယ်ချက်ပင်။မျိုးကိုကလဲသူ့ကိုခေါ်တာ ဒါလုပ်ဖို့ပင်၊နှစ်ယောက်သား တက်ညီလက်ညီအပြိုင်ကြဲနေကြသည်။ဒုတိယအချီတော့ တော်တော်လေးကြာသည်။ပြီးသွားတော့ ဖြူကျော့လဲ ဖလက်ပြသွားသလိုမျိုးကိုလဲဟိုက်သွားသည်။ဖြူကျော့ကအကြိမ်ကြိမ်ပြီးခဲ့ရသည်မို့ ခဏကြာတော့အိပ်ပျော်သွားသည်။သူလဲ အိပ်လိုက်သည်။မနက်ကျအိပ်ရာကနိုးတာနဲ့မနက်စာစားကာ ဘာအံမြိုအနီးတဝိုက်တွင် လျှောက်လည်ပြီး အပြန်ကားလတ်မှတ်ဝင်ဝယ်ကာ ဟိုတယ်သို့ပြန်လာပြီး ဆွဲကြပြန်သည်။ညနေကျရေချိုးအဝတ်လဲကာ ကားဂိတ်သို့လိုက်ပို့ပေးလိုက်သည်။
သူလဲကားထွက်သွားမှပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။ နောက်ရက်မနကမှာတော့ဖြူကျော့သူ့ဆီဖုန်းဆက်ကာ ရုံးတက်နေပြီဟု။သူလဲ အဆောက်အဦးလက်စသတ်ဖို့အတွက် လုံးပမ်းနေရပြန်သည်။တခါတလေမိန်းမကိုသတိရလွမ်းဆွတ်မိပေမယ့်အလုပ်တွေပြီးမှသာသွားလို့ရပေမည်။ မျိုးကို ပုသိမ်သို့ သုံးရက်လောက်သွားကာမိန်းမနဲ့တွေ့လိုက်သည်။မွေးတော့မည်မို့ ချစ်ဇနီးက သူ့ကိုအနားမှာရှိစေချင်သည်။သူလဲ မွေးခါနီးရင်လာမည်လို့ကတိပေးရသည်။တော်ပေသေးသည်။ယောက်ခမတွေက သဘောပြည့်လို့သာ။တစ်လခန့်ကြာတော့အဆောက်အဦးကအားလုံးပြီးသွားပြီ။အခန်းဖွဲ့လို့ပြီးပြီမို့ အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်ရေးနဲ့ နေရာချထားပေးရေးကတော့ ရုံးချုပ်မှ အဖွဲ့ထပ်လွှတ်လိုက်ပြီမို့ သူ့တာဝန်ပေါ့သွားပြီ။သူလဲ ခွင့်တင်တော့ မေးရာ မိန်းမမီးဖွားမှာမို့ဟုပြောသဖြင့် သူ့ကို တစ်လလစာပြည့် နှင့်ခွင့်ပေးသည်။သူလဲမိန်းမဆီပြန်သွားလိုက်သည်။သူရောက်ပြီးသိပ်မကြာ သမီးလေးမွေးပေးသည်။
အဖိုးအဖွားကသည်းသည်းလှုပ် သူကလဲတုန်နေအောင်ချစ်သည်။ပြန်တောင်မပြန်ချင်။တစ်လပြည့်တော့ ပြန်ရတော့မည်။မိန်းမက မျက်ရည်ဝဲတဲဝဲတဲနှင့်။သူလဲ သမီးလေးမျက်နှာကြည့်လိုက် မိန်းမကိုချော့လိုက်လုပ်နေပေမယ့်စိတ်ထဲမှာငိုချင်မိသည်။မတက်သာပေမယ့်ခွဲရဦးမည်။ ဘားအံပြန်ရောက်တော့ မိန်းမနဲ့သမီးသတိရနေတာမို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ သတိမရ။အလုပ်ထဲပဲ အာရုံနှစ်ထားလိုက်သည်။ရောင်းလိုအားလဲ တက်လာပြီ။လူခန့်ထားရေးနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ပေးရေးအတွက် ရုံးချုပ်ကသူ့ကိုပင်တာဝန်ပေးတာမို့ လုပ်ရသည်။သူလဲ ရုံးက အခန်းတစ်ခန်းယူကာ နေလိုက်သည်။ရုံးချုပ်မှာ ဝန်ထမ်းတချို့နဲ့ ဒီမှာသူခန့်ထားတဲ့လူတွေအတွက် သူစီစဉ်ပေးရသည်။ကိုယ်စားလှယ်ပေးရေးကို သူစီစဉ်ပြီးသားမို့ ပစ္စည်းတွေရောက်တာနှင့်ပေးရုံသာ။အလုပ်တွေပိနေတာမို့ သူနဲ့ဖြူကျော့လဲမဆက်သွယ်ဖြစ်။လိုင်းလဲမဖွင့်။ အားလုံနေသားတကျစီစဉ်ပြီးတော့ သူအားသွားပြီ။လုပ်ငန်းက လည်ပတ်စပြုနေပြီမို့ အရင်လောက်သူ ပါစရာမလိုပေ။
ဒါကြောင့်အားသွားပြီမို့ သူလိုင်းဖွင့်လိုက်ရာ မက်ဆေ့တွေမနည်းပေ။ဖြူကျော့နဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဆီက။သူဖတ်ပြီးမှ တစ်ခုချင်းပြန်စာပို့လိုက်သည်။ဖြူကျော့ဆီဖုန်းဆက်တော့ စိတ်ကောက်နေလို့ချောရသေးသည်။သူလဲတွေ့ချင်မိတာမို့ ချိန်းလိုက်ရာ ဘားအံသို့မလာရဲတော့ပေ။ရုံးချုပ်ကလူတွေရောက်နေုပီမို့ ရန်ကုန်ကိုသာချိန်းလိုက်သည်။တွေ့သည့် ချိန်တွင် ရေကုန်ရေခန်းပဲလုပ်ဖြစ်ကြသည်။တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်သူတို့တွေ့ဖြစ်ကြသည်။မတွေ့တာလဲ ကြာပြီမို့။သူ့ဘဲနဲ့ပြန်ပြေလည်နေပြီး ရုံးတွင်လဲ နောက်တယောက်နဲ့ညက်နေသည်လို့ပြောသည်။ သမီးရက်တစ်ရာပြည့်လုပ်တော့ သူခွင့်ခဏပြန်သွားလိုက်သည်။နှစ်ရက်သုံးရက်နေပြီးပြန်လာရပြန်သည်။အလုပ်ကမရှိပေမယ့် သူကနယ်ခံလိုဖြစ်ပြီးတာဝန်ခံနေရသဖြင့် ရှိနေမှရသည်။ရုံးမှာအားသည့်အချိန်တိုင်း လိုင်းပေါ်မှာပင် ဖြူကျော့နဲ့ပြောလိုက် တခြားသူတွေနဲ့ပြောလိုက်။ဒီတပတ်ချိန်းရာ သူ့ဘဲနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတာမို့ မအားဘူးလို့ပြောသည်။သူလဲတင်းသွားရသည်။
သို့သော် သူနားလည်ပေးရပေမည်။အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပြောပါလို့ပြောလိုက်သည်။ရုံးက ဘော်ဒါနဲ့စကားစပ်မိတော့ ဖြူကျော့က ရုံကဘဲတယောက်နဲ့ ညက်နေသည်လို့ပြောသည်။ တစ်လနီးပါးကြာတော့ ဖြူကျော့က သုံးရက်ပိတ်တဲ့အပတ်မှာ ရန်ကုန်က သူ့အဘွားအိမ်သွားရမည်။နောက်ရက်တွင်တွေ့လိုရမည်မို့ သူ့ကိုလာခိုင်းရာ သူလဲ အိုကေလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်သည်။သူဒီတစ်ခါတော့ ဖြူကျော့ရဲ့ဖင်ကိုလုပ်မည်ဟုတေးထားလိုက်သည်။ အစားထိုးချစ်သူ(၃) ဖြူကျော့ သူ့ဆီဖုန်းဆက်လာသည်။ရန်ကုန်ရောက်နေပြီ။မနက်ဖြန်နေ့လည်တွေ့ကြမယ်ဟုပြောလို့ သူလဲ ညဖက် ရန်ကုန်သို့ သူ့ကားနဲ့ထွက်လာလိုက်သည်။ရုံးလဲပိတ်သည်မို့ ပြန်တဲ့သူတွေလဲ ပြန်ကြ ရှိတဲ့သူတွေကို သူခရီးသွားမှာမို့ အရေးမကြောင်းဖုန်းဆက်ရန်မှာခဲ့သည်။ရန်ကုန်ရောက်တော့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချကာ ချောင်ကျတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုရှာလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်ခန်းတစ်ခန်းယူထားလိုက်သည်။
အွန်လိုင်းပေါ်က pageတစ်ခုမှာတွေ့လို့လာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။တော်တော်ကောင်းသည်။အခန်းကကျယ်ဝန်းသပ်ရပ်ပီး အခန်းထဲမှာ ပစ္စည်းအကုန်ရှိသည်။ဈေးတော့နည်းနည်းကြီးပေမယ့် လူရှင်းပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာမို့ တန်သည်။သူလဲရောက်တော့ ဖြူကျော့ကို ဝိုတယ်နာမည်နဲ့နေရာပြောကာ သူရောက်နေပြီအကြောင်းပြောလိုက်သည်။ဖြူကျော့က မနက်ဖြန်မနက်ဆယ်နာရီလောက် ရွှေတိဂုံကိုလာခေါ်ဖို့ပြောသည်။ငူ့အဖွားတွေနဲ့ဘုရားသွားကာ ဘုရားကနေတန်းပြန်မယ်ပြောထားသည်ဟုပြောသည်။သူလဲ ဖုန်းချခါနီး ဖြူကျော့ကို မနက်ဖြန်တွေ့ရင် ဖင်ချချက်တယ်လို့ပြောတော့ ကြောက်တယ်ဟုပြောပြီးဖုန်းချသွားသည်။သူလဲအခန်းထဲမှာလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးဘာမှမရှိတာသေချာတာ့မှ လုပ်စရာရှိတာလုပ်လိုက်သည်။ရေချိုးပြီးအိပ်လိုက်သည်။မနက်ရှစ်နာရီထိုးခါနီးမှနိုးကာ မျကနှာငစ်ပြီးမနက်စာစားလိုက်သည်။ကိုးနာရီကျော်တော့ ဖြူကျော့က ဘုရားသို့သွားနေပြီဟုပြောသည်။
သူလဲ ရေချိုးအဝတ်လဲကာ သူ့ကားယူပြီးဘုရားသို့မောင်းလာခဲ့သည်။ဘုရားရောက်တော့ ငူ့ဘုရားရှိခိုးလိုက်ပြီး ဖြူကျော်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်သည်။တော်တော်လေးကြာတော့ အစိမ်းရောင်အထက်အောက်ဆင်တူအပျော့သားကိုဝတ်ကာ လက်ကအိတ်အသေးတစ်လုံးနဲ့သူ့ဆီလာနေတဲ့ ဖြူကျော့ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။သူလဲအိတ်ကိုယူပေးကာ ဖြူကျော့ကို ကားထားတဲ့ဖက်ဆီခေါ်လာခဲ့သည်။သွားနေရင်းနဲ့ အစိမ်းဝမ်းဆက်နဲ့အိတ်ကိုင်ထားတော့ မမြစိမ်းမှတ်နေတာဟုပြောရာ ဖြူကျော့က ရီနေသည်။ကားမောင်းနေရင်း သူကဖင်ချမှာနော်လို့ပြောတော့ ဟမ် ဟင် နာမှာကြောက်တယ်လို့ပြောသည်။သူကလဲမရဘူး တကယ်လုပ်မှာပဲပြောတော့ ရီပြီး သူ့လက်မောင်းကိုဖက်ကာမှီပြီးလိုက်လာသည်။ဟိုတယ်ရောက်တော့ သူ့အခန်းကိုခေါ်လာလျုက်သည်။အခန်းတံခါးကိုပိတ်ကာ အဲကွန်းဖွင့်လိုက်ပြီး ဖြူကျော့အိတ်ကို စားပွဲပေါ်တင်လိုက်သည်။ဖြူကျော့က တီဗွီကိုဖွင့်ကာ ခုံပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးကြည့်နေသည်။
သူလဲ အပေါ်အင်္ကျီကိုချွတ်ကာ ခုံပေါ်တွင်တင်လိုက်ပြီးဖြူကျော့ကိုဆွဲထူလိုက်သည်။ပေကပ်ကပ်နဲ့ “အာ ယောက်ခမကလဲ ဒီမှာကားကောင်းနေတာတာကို” “အဲ့ထက်ကောင်းတာပြမလို့”ပြောပြီး ကုတင်နားခေါ်လာကာ နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်သည်။လျှာခြင်းကစားကာ ဖင်တွေကို ညှစ်လိုက်သည်။ဖင်ပေါ်ကနေ ပင်တီအရာကို စမ်းပြီး လက်နဲ့မျှော့ကြိုးတွေကိုဆွဲလိုက်လွှတ်လိုက်လုပ်နေသည်။ထမိန်စကပ်က အကြပ်မို့ တင်ပါးတွေက ထွက်နေပေမယ့် မကြီးလှပေ။တင်ပါးတွေကိုစိတ်ရှိတိုင်းညှစ်လိုက်ကိုင်လိုက်အားရအောင်လုပ်ပြီးမှ သူကုတင်ပေါ်သို့ လှဲကာ အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်သည်။ကြယ်သီးတွေက နောက်ဖက်တွင်အပြည့်တပ်ထားတာမို့စိတ်မရှည်ချင်စရာ။တလုံးချင်းဖြုတ်နေရတာ။ဆွဲဖြဲလိုက်ချင်ပေမယ့်မဖြစ်လို့။တခါတည်းဘရာ ခရမ်းရောင်ကိုပါဖြုတ်လိုက်ပြီးဆွဲလှန်ကာ နို့တွေကိုက်နှစ်ဖက်နဲ့ညှစ်ကာနယ်ပြီးနို့သီးခေါင်းတွေကို ကလိလိုက်သည်။ “ယောက်ခမ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲလို့။
ဒီနေ့အရမ်းကြမ်းနေတယ်။ဟင့် သူများထွက်ပြေးမှာကျနေတာပဲ။”ဘာမှမပြောပဲနဲ့နို့တွေကို စို့လိုက်ပြီးလက်က သူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချလိုက်သည်။”ကြည့်ပါလား စကားလဲမပြောဘူး။ဟင့် ဟင့် ” နွဲ့နေသည်။သူ့စိတ်ထဲမှာတင်းနေသည်မို့လက်တွေပါးသပ်တွေက အအားမထား။ ဇယ်ဆက်သလိုလှုပ်ရှားနေသည်။ထမိန်စကပ်ကိုချွတ်လိုက်တော့ ပင်တီအဖြူရောင်က အရည်တွေနဲ့စိုကာကွက်နေသည်။သူလဲ ပင်တီကိုချွတ်လိုက်ပြီး ပေါင်းကိုကားကာ အစေ့ကိုကလိလိုက်သည်။ဖြူကျော့ ရှီး အာ့ ခနဲ့အော်ကာ ခေါင်းလေးမော့တက်သွားပြီး သူ့လက်ကိုလာကိုင်လိုက်သည်။သူလဲ လက်ကို လီးပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်ရာ လီးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကာကစားပေးသည်။ သူလဲ အဖုတ်ထဲသို့နှိုက်လိုက်ပြန်သည်။ဝင်ချည်ထွက်ချည်နဲ့မို့ အရည်တွေကျလာသည်။ပေါင်းတစ်ဖက်ကိုလက်မောင်းနဲ့ချိတ်ကာအပေါ်သို့ ဆွဲထောင်လိုက်ပြီး အဖုတ်ထဲက အရည်တွေကိုကော်ကာ ဖင်ဝတွင်သုတ်လိုက်ပြီးဖင်ဝကို ထည့်လိုက်သည်။
အလည်သွားနေကျမို အခက်အခဲမရှိဝင်သွားသည်။ဖင်က လက်ကိုညှစ်ထားသေးသည်။ဧည့်သည်လက်မခံချင်သေးသည့်သဘော။အဖုတ်ထဲကို နှိုက်ပြီးဖင်ကိုကလိနေတာမို့ တဖြည်းဖြည်း ဖင်ရဲ့ညှစ်အားက လျော့လာသည်။မြန်မြန်ပဲထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်လိုက်ရာ ဖြူကျော့ တအီးအီးနဲ့အော်ကာ လီးကိုတင်းတင်းကြီးကိုင်ကာထုနေသည်။သူလဲ ဖြူကျော့ကို နေရာပြောင်းလိုက်ပြီး ခုတင်းစွန်းတွင်ခေါင်းထားကာ ပါးစပ်ထဲလီးထည့်ပေးပြီး လက်တွေက ဖင်နဲ့အဖုတ်ထဲသို့ ထည့်ကာကလိနေသည်။အဖုတ်ထဲက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ညှစ်အားသန်လာပြီးဖင်ကလဲညှစ်ညှစ်လာကာ ကိုယ်လုံကဆက်ခနဲဆက်ခနဲ ဖြသ်သွားပြီး ခြေတွေလက်တွေက ကုပ်သွားကာ ပါးသပ်က ဆအွန်းအွန်းနဲ့ဖြစ်လာပြီး ပြီးသွားသည်ထင်သည်။အဖုတ်ထဲက လက်ကိုထုတ်လိုက်ရာ အရည်ဖြူဖြူတွေစီးကျလာလို့ လက်ညှိုးနဲ့ကလော်လိုက်သည်။ပြီးဖင်ဂကိုသုတ်ပေးလိုက်သည်။အဖုတ်ထဲမှအရည်တွေက အောက်သို့သီးကျလာရာ ဖင်ဝရောက်တော့ လက်တွေနဲ့ယူပြီးလက်ညှိုး လက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူးကာထည့်လိုက်သည်။
ကြပ်ကြပ်နဲ့ဝင်သွားပေမယ့် လက်သင့်ခံသည့်သလော။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရသာကောင်းလို့ထင်သည်။ဖင်တွေက ကော့ကော့လာသည်။အသေ့ကိုထပ်ကလိပေးလိုက်ပြီး ပါးစပ်ထဲကလီးကိုထုတ်လိုက်ပြီး သူ့ပေါ်ကနေတက်ဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။ဖြူကျော့လဲ သိတ်ဆာနေသညိမို့ မြန်မြန်ပင် အပေါ်ကနေလီးကိုကိုင်ကာအဖုတ်ထဲထည့်ပြီးခပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုက်သည်။ဆောင့်ချက်တွေတဖြည့်ဖြည်းမြန်လာပြီးပြီးတော့မည်။သူလဲ ဖက်ထဲသို့ထည့်ထားတဲ့လက်တွေကို ထပ်မံကစားလိုက်ရာ ပါးစပ်မှ “အင်း အင်း အင့် အင့် ကောင်းတယ် အာ့ အာ့ ကောင်းတယ် အာ့ဟ”အော်ဟစ်နေရင်းမနားတမ်းဆောင့်ချလိုက်သည်။ဖြူကျော့ နောက်တစ်ခါပြီးသွားသည်။သူ့ပေါ်မှောက်ကျလာပြီး ပါးစပ်ကိုဟကာ အသက်ကို လုရှူနေသည်။သူလဲ ဖင်တွေကိုညှစ်ကာ ကိုင်လိုက် ဖြည်းဖြည်းချင်းရိုက်လိုက်လုပ်နေသည်။အဖုတ်ထဲက လီးကိုညှစ်နေသေးသည်။တဖြေးဖြေးအမောပြေလာတော့ သူဖြူကျော့ကို ဖင်ချမယ်ကုန်းပေးလို့ပြောတော့ ဟင့် အရမ်းမလုပ်နဲ့နော် သူ့ဟာကြီးက အကြီးကြီးနဲ့ သူများကြောက်တယ်။
နာရင်မခံဘူးနော် ဟင့်။” “အစတော့ နာမှာပေါ့။နောက်တော့မနာတော့ဘူး။နောက်ကျရင်ကောင်းလွန်းလို့ ဖင်ပဲလုပ်ပါဆိုပြီးမပြောနဲ့” “ဟင့် သူကခံဖူးတာကြနေတာပဲ။ကြောက်တယ်နော်တော်ကြာ ညီမ ဖင်ကွဲသွားမှာဖြင့်” “မကွဲစေရပါဘူးစိတ်ချ” ငြင်းနေပေမယ့် ကုန်းပေးလိုက်သည်။သူလဲ ပုဆိုးတထည်ယူကာ သူ့အောက်တွင်ခင်းလိုက်ပြီးကိုယ်ကို ရှေ့ကိုဝပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးဖင်ကို အပေါ်သို့ထောင်ခိုင်းကာ ဒူးတွေကိုချဲခိုင်းလိုက်ပြီး သူ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ပေးလိုက်သည်။ဖင်သားတွေက ပြဲသွားပြီး ခရေညိုညိုလေးပေါ်လာသည်။သူစိတ်ကယားသွားပြီး ဖင်တွေကိုရိုက်လိုက်ရာ”ဖျန်း” “အာ့ ဘာလို့ရိုက်တာလဲလို့ စပ်တယ်သူ့အသားမဟုတ်တိုင်း ယောက်ခမနော် ဟင့်ဟင့်”သူဘာမှမပြောပဲဆက်ရိုက်လိုက်ရာ ဖြူဖွေးနေတဲ့တင်ပါးတွေက နီရဲလာသည်။ပြီးတော့ စအိုဝကို တံတွေးထွေးကာ အဖုတ်ထဲသို့လက်နဲ့နှိုက်ပြီး ထည့်လိုက်ပြီး “တောက် လှလိုက်တဲ့ဖင်လေးကွာဟင်းဟင်း” “လုပ်မှာဖြင့်လုပ်တော့။
ဒီမှာရှက်လာပြီကွာ “ဖင်တွေကိုဖြဲပေးထား ကိုယ် လီးကိုင်ပြီးထည့်မလို့” “ဝင့် သူများကိုသိပ်အနိုင်ကျင့်တာပဲ”ပြောရင်း ဖင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖြဲပေးလိုက်သည်။စအိုဝကစူတူတူလေးဖြစ်သွာလိုက် ချိုင့်သွားလိုက်နဲ့။စအိုဝမှာတံတွေးတွေနှင့် အရည်တွေကြောင့်စိုလက်နေသည်။သူလဲ တံတွေးထပ်ထွေးချကာလီးကိုတံတွေးစွတ်လိုက်ပြီး စအိုဝကိုဖိထောက်လိုက်သည်။စအိုကကျုံသွားလို့ရပ်ထားလိုက်ပြီးကျောကိုပွတ်ပေးလိုက်သည်။စအိုကစူလာချိန်မှာတော့ ဖိကာထည့်လိုက်ရာ လီးထိက်ကနည်းနည်းဝင်သွားကာ စအျုသားတွေကလီးနဲ့ကပ်ပါသွားသည “အား ကျွတ်ကျွတ် ဖြေးဖြေး နာတယ်လို့ ဟင့် သူများကိုမညှာဘူး” သူလဲ ရပ်လိုက်သည်။တံတွေးကိုထပ်ထွေးချလိုက်ပြီးလက်က အစေ့ကိုပွတ်ပေးလိုက်လို့ တုန်သွားပြီးစအိုက. ညှစ်အားလျော့သွားတော့ ဖိထည့်လိုက်ရာ ဒစ်တစ်ခုလုံဝင်သွားသည်။ဒစ်ကို တင်းကျပ်စွာ ညှစ်ထားသည်မှာ ကောင်းလှသည်။ “အာ ဟင့်ဟင့် နာတယ်နာတယ် မရဘူးထင်တယ် အရမ်းနာတယ် ညီမ မခံနိုင်တော့ဘူးယောက်ခမ” “ခဏလေး ခဏလေး ပြီးရင်မနာတော့ဘူး” “ဟင့်ဟင့် ငိုချင်လာပြီ” သူလဲ စအိုကိုညှစ်မထားဖို့ပြောရသည်။
အစေ့ကို လက်နဲ့ဖိဖိခေိပေးနေရာ အဖုတ်ထဲက အရည်စိမ့်ကာလာပြန်သည်။ဖင်ရဲ့ ညှစ်အားက လျော့သွားပြန်တော့ ဖြေးညှင်းစွာ တစ်ရစ်ချင်းထည့်လိုက်သည်။တတစ်တစ်နဲ့ စအိုဝတွေက လိပ်လိပ်ကာ လီးကလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝင်နေသည်။လက်ကအစေ့ကျု ဆက်တိုက်ချေပေးနေသည်။ဖင်ဝက ခုနကလောက်မနာတော့ပေ။သွင်းစက ဖင်ကို မီးစနဲ့ထိုးသလိုပူနေပြီး တစ်စို့စို့နဲ့အရမ်းနာပေမယ့် ခုတော့ သက်သာလာသလို နယတာက ကောင်းလာသည်။လီးအဝင်ကို လက်ခံလာသည်။သူမလဲ ဖင်ဝကို လျော့ကာ အဲ့အရသာကိုခံစားနေသည်။လီးကတစ်ဝက်လောက်ဝင်သွားတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထုတ်လိုက်သည်။ဒစ်နားရောက်တော့ တံတွေးထပ်တွေးချကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထည့်လိုက်ပြန်သည်။ဖြူကျော့မှာ လီးထွက်တိုင်းအင်းအင်းနဲ့အော်သလို လီးဝင်တိုင်း အာ့အာ့နဲ့ဖြစ်နေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လီးကအဝင်ချောလာတော့ ခံနိုင်လာသည်။ကောင်းလာသည်။
ဖင်ရဲ့အရသာက တကိုယ်လုံးကိုပျံ့နှံ့လာသည်။သူ ကြိုက်လာသည်အဲ့ဒီအရသာကို။အဖုတ်ထဲကနေမတူ။လီးကဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်နေထွက်နေရာမှ နည်းနည်းလေးသွက်လာတော့လဲ ခံနိုင်လာသည်။ဒါကြောင့် လီးကို အဆုံးထိထည့်လိုက်တော့သည်။ဖြူကျော့ရဲ့အော်သံက နာကျင်လို့အော်သံနေရာမှာ ကောင်းလို့အော်သံဖက်ကိုပြောင်းလာသည်။ဒါကြောင့်သူလဲ ပြန်ထုတ်ကာပြန်ထည့်လုပ်နေရင်း”ဖြူကျော့ နာသေးလားဖင်က” “မနာတော့ဘူး။ရတယ် ဆောင့်ဆောင့်ခံနိုင်လာပြီ။အင့် ဟင့်ဟင့်” ခံနိုင်လာပြီမို့ ဆောင့်စေချင်လာသည်။သူလဲ လီးကိုတဆုံးထိထုတိကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းတဆုံးထိထည့်လိုက် လီးတစ်ဝက်လောက်ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်လယခပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုက် လိုးနေသည်။ ဖြူကျော့ ပါးစပ်မှလဲ ကောင်းလို့ အေည်သံက တဏှာသံပါနေသည်။သူလဲ ဆောင့်ချက်များလာတော့ ညောင်းလာလို့ လီးကိုဖင်ထဲမှချွတ်လိုက်သည်။ “ဘာလုပ်တာလဲလို့ ဒီမှာကောင်းလာပြီဟာကို”ရန်တွေ့နေသည်။
ကြာတော့ ဒူးညောင်းလာလို့ လာ ကုတင်အစွန်းနားတိုးကာ ကုန်းခိုက်းလိုက်ပြီးသူကနောက်ကနေမတ်တပ်ရပ်ကာ ဖြူကျော့ ဖင်ကိုလက်နဲ့ပြန်ဖြဲခိုင်းလိုက်ပြီး လီးကိုထည့်လိုက်သည်။ခါးအားနဲ့ တင်ပါးအားကိုသုံးကာ ဆောင်ဆြောင့်ပေးရင်း လက်က အဖုတ်ထဲနှိုက်နေသည်။ဖြူကျော့လဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကောင်းလာပြန်သည်။ “ကောင်းလာဖြူကျော့ ဖင့်ခံရတာ” “ကောင်းတယ် အရမ်းကောင်းတယ် ဆောင့်ပေးပါ။ကိုရယ်” “ကြိုက်လား ဖင်ခံကတာကို ” “ဖြူကျော့ဖင်ကိုအားရပါးရဆောင့်လိုးပေးပါ။ဖင်ခံရတာအရမ်းကြိုက်တယ်။ဖင်ခံကတာကို ကြိုက်တယ်။” သူမ အရမ်းကိုဟော့နေသည်။အဖုတ်ကိုလုပ်တုန်းကကောင်းတာကတမျိူး ဖင်ကိုလုပ်တာကတမျိုး။ဖင်ကိုလုပ်တော့အဖုတ်ကပါယားလာသည်။အရမ်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုချင်လာသည်မို့ ဆောင့်ခိုင်လိုက်ရာ သူလဲ ဖင်ဖြဲထားတဲ့လက်တွေကို ဖယ်ကာ ဖင်တွေကိုအားရပါးရဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
သူဒီဖင်သေးသေးကိုင်ကာ ဖြူကျော့ ဖင်ကို အားရပါးရလိုးချင်နေတာကြာပြီမို့ စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်း ဆောင့်လိုက်သည်။လီးဝင်လီးထွက်ကလဲ ချောနေပြီမို့ မညှာတော့ပေ။ဖြူကျော့လဲ အရမ်းကိုဟေ့နေပြီမို့ ဆောင့်ချက်တိုင်းကြိုက်သည်။လက်တွေက ကိုယ့်အစေ့ကိုယ်ကလိနေလိုက်သည်။အရမ်းကိုကောင်းနေပြီ။အဖုတ်က အရမ်းကိုယားနေပြီ။လီးကို စအိုကြွက်သားတွေက အရမ်းကိုဆွဲဆွဲညှစ်နေပြီ။သူမပြီးတော့မည်။သူလဲ ပြီးချင်လာပြီမို့ ဖင်တွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်ကာ အားရပါးရဆောင့်လိုက်သည်။ “အာ့ အာ့ အာ့ ကောင်းတယ် ဆောင့်ဆောင့် ဟင့် ဟင့် အရမ်းကောင်းတယ် ပြီးတော့ မယ် ဆောင့်” “ကိုယ်လဲ ပြီးတော့မယ် အာ့ အား ” “အ အ ပြီးပြီ ပြီးပြီအာ့အားး” ဖြူကျော့ ပြီးသွားသည်။သူလဲဆက်တိုက်ဆောင့်နေရင်းလီးတစ်ခုလုံးတင်းလာကာ အကြောတွေတစ်ခုလုံးဖျက်းခနဲဖြစ်လာပြီမို့ လီးကိုတဆုံးထုတ်တဆုံးထည့်ကာဆောင့်လိုက်ရာ သူလဲ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ပြီးသွားရသည်။
ဖင်ထဲသို့ သုတ်ကည်တွေပန်းထည့်လိုက်သည်။ဖြူကျော့ရဲ့ လက်တွေကမွေ့ရာခင်းကို ကျစ်နေအောင်ဆုပ်ကိုင်ဖားရင်း ပါးစပ်ကနေဟင်းဟင်းနဲ့ကယောင်ကတန်းဖြစ်နေသည်။အဖုတ်ထဲမှလဲ ဖြူဖြူအရည်တွေဖွက်လာသည်။သူလဲတကိုယ်လုံးနှုံသွားသလိုပင်။ခဏနားပြီးလီးကို ဖင်ထဲမှဆွဲထုတိလိုက်ရာ ဖင်ဝမှ အရည်တွေထွက်လာသည်။ဖြူကျော့ ခွေကျသွားသည်။သူလဲ အနားက တစ်ရှူးကိုယူကာ လီးကိုသုတ်လိုက်ပြီးအမှိုက်ပုံထဲပစိလိုက်သည်။ဖြူကျော့ သူ့ကို လာဖက်ပြီးအတင်းနမ်းနေသည်။သူလဲ ဖြူကျော့ကိုပြန်ဖက်ထားလိုက်သည်။ပြီးနှစ်ယောက်သားရေချိုးခန်းသို့သွားကာ သန့်ကှင်းရေးလုပ်တော့ ဖင်ဝကကျိန်းစပ်နေသည်တဲ့ သူလဲချော့ရသည်။ပြီးတော့ ရေချိုးခန်းထဲက တဘတ်တွေပတ်ကာ ကုတင်ပေါ်တွင်လှဲပြီးအနားယူလိုက်သည်။သူ့ဒူးတွေထဲက အားမရှိတော့သလို။ဖြူကျော့ဝေမှာလဲ နှုံးသွားသည်။ဖင်ကိုလိုးရတာ အားပိုစိုက်ရသည့်အတွက် ပိုပင်ပန်းတာလဲပါမည်။နှစ်ယောက်သားဖက်ရင်းအိပ်ပျော်သွားကြသည်။
အိပ်ရာကနိုးတော့ ရေချိုးအဝတ်လဲကာ အပြင်သို့ကားနဲ့ထွက်ပြီးညနေစာစားပြီးလျှောက်သွားကြသည်။ပြန်လာတော့သူတို့ထပ်ဆွဲ ကြပြန်သည်။တစ်ညလုံးနီးပါးလုပ်ကြသည်။အဖုတ်ကိုရောဖင်ကိုရော ပါးစပ်ကိုပါလိုးသည်။သုံးနာရီထိုးခါနီးမှ ပြိုင်းသွားကြပြီးအိပ်ကြသည်။မနက်ကျတော့ ဆယ်နာရီကျော်မှနိုးကြသည်။ရေချိုးကာအဝတ်လပြီးအပြင်တွင်မနက်စာနေ့လည်စာပေါင်းစားကာ ဟိုတယ်သို့ပြန်လာကြသည်။ဟိုတယ်ရောက်တော့ ညက ကဲတာများသွားတာမို့ သိပ်စိတ်မပါကြတော့။အနားယူရင်း စကားပြောကာဟိုကလိဒီကလိလုပ်နေကြသည်။ပြီးတော့ အိပ်ပျော်သွားကြပြန်သည်။နှစ်နာရီထိုးတော့ နိုးလာကြပြီး နှစ်ယောက်သား စိတ်ပါလာကာ အပြန်အလှန်ဆွပေးကြသည်။ဖြူကျော့ရဲ့နို့သေးသေးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့စုခိုင်းကာ လီးနဲ့လိုးလိုက်သည်။သူဖြူကျော့ကို လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှန်သမျှလုပ်ကြည့်သည်။သူယောက်ကျားရရင်တောင် သူ့လောက် လုပ်ဖူးမယ်မထင်။ပြီးတော့ ဖင်ကိုအရင်လိုးလိုက်သည်။
သူမ ဖင်ခံရတာကို ကြိုက်နေပြီမို့ ဇိမ့်တွေ့နေသည်။သူဖင်ကိုပဲအားရအောင်လုပ်လိုက်ပြီး နှစ်ယောက်သားပြီးသွားသည်။ခဏနားကာ ရေချိုးအဝတ်အစားလဲပြီး အဝတ်တွေအိတ်ထဲထည့်လိုက်သည်။ဟိုတယ်ခရှင်းကာ ကားဂိတ်သို့လိုက်ပို့ပေးလိုက်သည်။သူမပြန်ရတော့မည်။ဖြူကျော့က သူ့ကို အရမ်းခိုက်တာပဲလို့ပြောသည်။ကားထွက်တဲ့ထိစောင်ယြ့ပြီး သူလဲ ညတွင်းချင်းဘားအံသို့ပြန်လာလိုက်သည်။ ဒီလိုနဲ့သူဘားအံမှာနောက်ထပ်ခြောက်လလောက်နေရသည့်အချိန်တွင်တလကိုတခေါက်လောက်တော့ဖြူကျော့နဲ့ချိန်းကာ လိုးဖြစ်ကြသည်။တွေ့သည့်အခါတိုင်းတွင် ဖြူကျော့က သူ့ကိုဖင်ကိုအရင်လုပ်ခိုင်းသည်။သူကလဲ ဖင်ချရတာကြိုက်သူမို့မငြင်းပေ။ဖြူကျော့က သူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသည်။သူဖင်ခံရတဲ့အရသာကို အရမ်းစွဲလန်းတယ်ဟု။ယောက်ကျားရရင်တောင် ဖင်မချမှာစိုးရိမ်မိတယ်လို့ပြောသည်။သူလဲခြောက်လကျော်တော့ ရုံးချုပ်က သူ့ကို ရာထူးတိုးပေးကာ သူ့စိတ်ကြိုက်နယ်ကိုရွေးပြီးပြောင်းနိုင်တယ်ပြောလို့ သူလဲပုသိမ်ဖက်ကိုရွေးလိုက်သည်။
ပုသိမ်သို့တိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ပြောင်းရသည်။ဘားအံမှာသူဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းက အရမ်းကိုအောင်မြင်နေသည်မို့ ကုမ္ပဏီကလူကြီးတွေက သဘောကျကာ ရာထူးတိုးပေးပြီးသူ့ကို ဘောနပ်စ်လဲပေးသည်။သူ့အတွက်ဘားအံလိုနေရာက အရမ်းအဆင်ပြေခဲ့သည်။ငွေကိုအကြိုက်သုံးခွင့်ရလို့ သူ့အတွက် သိန်းပေါင်းများစွာရခဲ့သလို ဘောနပ်စ်ကလဲ ရောင်းချမှုရဲ ဆယ်ရာခိုင်းနှုန်းပေးသည်။သူဘားအံသို့ပြောင်းလာသည့်တာဝန်ခံကို လွှဲစကာရှိတာတွေလွှဲကာ ညဖက်တွင်သူအရင်ကနေခဲ့တဲ့အဆောင်က ချာတိတ်တွေသု့မိတ်ဆွေတွေကိုတည နှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ကာနောက်ရက်ညတွင် ရုံကလူတွေကိုနှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပြီး ပုသိမ်သို့ပြောင်းခဲ့လိုက်သည်။ပုသိမ်တွင် သူ့မိန်းမမိဘအိမ်မှာပင်နေကာ အလုပ်လုပ်သည်။သမီးနဲ့မိန်းမအနားမှာရှိတော့ သူ့အတွက်ဘာမှမလိုအပ်တော့ပေ။ဖြူကျော့နဲ့တော့လိုင်းပေါ်တွင်အမြဲတွေ့ဖြစ်ပေမယ့် သူမလဲ ဘဲအသစ်ရသွားပြီ။
ယူတော့မည်ပြောသည်။နောက်ပိုင်းတွင် တောင်ငူဖက်သို့ ပြောင်းသွားကာ အိမ်ထောင်ကျသွာပြီ။ဗိုလ်တစ်ဦးနှင့်တဲ့။သူ့ကိုဖိတ်လို့လက်ဖွဲ့လှမ်းပို့လိုက်သေးသည်။ခုတော့ကိုယ်ဝန်ရနေပြီဟုပြောသည်။သူ့သမီးလဲခုဆိုနှစ်နှစ်တောင်ပြည့်တော့မည်။သူမလဲကလေးရတော့မပေါ့။တခါတလေသူ့ကို သတိရမိကြောင်းစာပို့တက်သည်။သူမလိုချင်တာခုထိမရသေးကြောင်းနဲ့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်သူ့ယောက်ကျားကို ချစ်တာမို့ အပြစ်မတင်မိကြောင်းပြောတက်သည်။ တခါတရံသူလဲ ကွန်ပျူတာထဲမှ သူဖွက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယို ဖိုင်တစ်ခုကို လူလစ်ရင်ခိုးခိုးကြည့်မိတိုင်းအရင်တုန်းက အကြောင်းအရာကို ပြန်တွေးမိတက်သေးသည်။ သူနဲ့ဖြူကျော့နဲ့ကချစ်ရတဲ့သူတွေကိုယ်စီဝေးနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လိုအင် တွေပြည့်ဖို့အတွက်အစားထိုးခဲ့ကြတာပါလားဟု……. ပြီးပါပြီ။
June 15, 2021 August 1, 2021
သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်